ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာန | မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်
၂၀၁၈ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ
၂၀၁၇ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဆောင်ရွက်ချက်များ
လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ
၁၈။ ပြည်ပမှ တိုင်တန်းချက်များအား ဆောင်ရွက်မှု။ Amnesty International အပါအဝင် ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှ တိုင်တန်းချက်ပေါင်း ၁၀၆ စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတိုင်တန်းချက် များမှာ –
(က) International Work Group For Indigenous Affairs (IWGIA) မှ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေ ကြောင်း တိုင်တန်းချက် ၁ စောင်၊
(ခ) မလေးရှားနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့် အရေးကော်မရှင်မှ Myanmar Stark Prestige Plantation (MSPP) ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်ကာ ဒေသခံများအပေါ် ထိခိုက်နစ်နာမှုများနှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းတိုင်တန်းချက် ၁ စောင်၊
(ဂ) မြဝတီမြို့တွင် လူဝင်မှု ဥပဒေဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံရသော မလေးရှား နိုင်ငံသား ၄ ဦးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခြေအနေ သိရှိလိုကြောင်း E-mail ဖြင့် မေးမြန်းချက် ၁ စောင်၊
(ဃ) ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂါလီ (၎င်းတို့အခေါ် ရိုဟင်ဂျာ) များအား ဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေသည်ဟု ဖော်ပြလျက် ၎င်းတို့အပေါ် လူသားဆန်စွာပြုမူ ဆက်ဆံပေးရေးနှင့် ယင်းသို့ ဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်နေသူများအား အရေးယူပေးရေး တို့ကို တောင်းဆိုထားသည့် တိုင်တန်းချက် ၃၅ စောင်၊
(င) Eleven Media မှ သတင်းထောက် ကိုစိုးမိုးထွန်း မုံရွာမြို့တွင် အသတ်ခံရသည့် ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တိုင်တန်းချက် ၁ စောင်၊
(စ) ရှမ်းပြည်နယ်တွင် သတင်းသမား ၃ ဦးအား တပ်မတော်မှဖမ်းဆီး အရေးယူထားသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းချက် ၁ စောင်၊
(ဆ) မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ကချင်လူမျိုး ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆရာ ၂ ဦး ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်တန်းချက် ၃၈ စောင်နှင့်
(ဈ) MDCF မှ ကိုထင်ကျော် လွတ်မြောက်ရေးကိစ္စ တိုင်တန်းချက် ၂၈ စောင်တို့ ဖြစ်ပါ သည်။
၁၉။ ယင်းတိုင်ကြားချက်များအား အောက်ပါအတိုင်း ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-
(က) International Work Group For Indigenous Affairs (IWGIA) မှ တိုင်ကြားသည့် နာဂ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ကိစ္စကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ ပေးပို့အသိပေးခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့ ပါသည်။
(ခ) MSPP ကုမ္ပဏီ၏ ဆီအုန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းပြီး ဒေသခံများ ထိခိုက်နစ်နာမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ယင်းဒေသသို့ ကွင်းဆင်း လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ ပေးပို့တင်ပြခဲ့သည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ လည်း ပေးပို့အကြောင်းကြားအသိပေးခဲ့ပါသည်။
(ဂ) မြဝတီမြို့တွင် မလေးရှားနိုင်ငံသား ၄ ဦး အဖမ်းခံရသည့်ကိစ္စ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြန်ကြားလာမှုကို တိုင်တန်းချက်ပေးပို့ခဲ့သော မလေးရှား အမျိုးသား လူ့အခွင့် အရေး ကော်မရှင်သို့ ပြန်လည် အကြောင်းကြား ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(ဃ) ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဘင်္ဂါလီများအား ဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေသည်ဟု တိုင်တန်းချက် နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ပေးပို့ခဲ့ရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ ပြန်ကြားချက်ကို တိုင်တန်းချက်ပေးပို့ခဲ့သော နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ သို့ ပြန်ကြား အသိပေးခဲ့ပါသည်။
(င) Eleven Media မှ သတင်းထောက် ကိုစိုးမိုးထွန်း အသတ်ခံရသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ မေးမြန်းခဲ့ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ၎င်းတို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေမှု အခြေအနေများကို ပြန်ကြားလာခဲ့ပါသည်။
(စ) ရှမ်းပြည်နယ်တွင် သတင်းသမား ၃ ဦးအား တပ်မတော်မှဖမ်းဆီး အရေးယူထားသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ၉-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့က သီပေါအကျဉ်းထောင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည့် ခရီးစဉ်တွင် ယင်းသတင်းသမား ၃ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနသို့ အကြံပြုချက်ပေးပို့ခြင်း၊ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ များမကြာမီ ၁-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့၌ ယင်းသတင်းထောက် ၃ ဦး သည် ပြန်လည် လွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။
(ဆ) ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ကချင်လူမျိုး ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆရာ ၂ ဦးတို့အား ၂၄-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့က မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင် စစ်ဆေးသည့် ခရီးစဉ်တွင် ယင်းတို့ ၂ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြံပြုချက် ပေးပို့ခဲ့ ပါသည်။
(ဈ) MDCF မှ ကိုထင်ကျော် လွတ်မြောက်ရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းစာရရှိချိန်တွင် လွတ်မြောက်သွားပြီးဖြစ်၍ မှတ်တမ်းထားရှိခဲ့ပါသည်။
စဉ် (ပြည်ပ) ဆောင်ရွက်မှု ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇
ယခင်လက်ကျန် ၈၂၀ မရှိ
ယခုလက်ခံရရှိမှု ၂၅၉၈ ၁၂၇၄ ၁၀၆
တစ်နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်ရန် စုစုပေါင်း ၂၅၉၈ ၂၀၉၄ ၁၀၆
သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း ၆၀၇ ၁၈၅ ၃၈
တိုင်တန်းသူများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း ၃၁၂ ၉၁၅ ၃၉
မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ၈၅၉ ၉၉၄ ၂၈
၃ တစ်နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်မှု စုစုပေါင်း ၁၇၇၈ ၂၀၉၄ ၁၀၆
၄ လက်ကျန်အမှု ၈၂၀ မရှိ မရှိ
၂၀။ ပြည်တွင်းတိုင်တန်းချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်မှု။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ တိုင်စာပေါင်း ၁၁၂၅ စောင်လက်ခံရရှိခဲ့ရာ တိုင်တန်းချက်များကို စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး ၆၄ ကြိမ် ပြုလုပ်ကာ ၆၇၂ မှုကို လူ့အခွင့်အရေးနှင့် သက်ဆိုင်မှု မရှိသဖြင့် သိမ်းဆီးထားရှိခဲ့ပြီး ၄၅၄ မှုကို အောက်ပါအတိုင်း စိစစ်အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-
(က) သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ညှိနှိုင်းမေးမြန်းခြင်း ၂၉၁ မှု
(ခ) တိုင်တန်းသူများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း ၁၃၇ မှု
(ဂ) မှတ်တမ်းထားရှိခြင်း ၆ မှု
(ဃ) ကာယကံရှင်မှ အမှုရုပ်သိမ်းခြင်း ၃ မှု
(င) ပြည်တွင်းတိုင်တန်းချက်များအရ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ၁၇ မှု
စုစုပေါင်း ၄၅၄ မှု
၂၁။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ကွင်းဆင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း
(က) ပြည်တွင်းတိုင်တန်းချက်များအရ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ၁၇ ကြိမ်၊
(ခ) ပြည်ပတိုင်တန်း ချက်များအရ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ၁ ကြိမ်၊
(ဂ) လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများမှ သတင်းအရ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ၆ ကြိမ်
(ဃ) ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဒေသများသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း ၂ ကြိမ်
စုစုပေါင်း ကွင်းဆင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ၂၆ ကြိမ်
၂၂။ အကြောင်းပြန်ကြားစာရရှိမှု။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ ပြန်ကြား စာ ၂၇၉ စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်မှ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများသို့ ညှိနှိုင်းမေးမြန်းခဲ့သည့် အမှုပေါင်း ၂၉၁ မှုအတွက် စာပေါင်း ၃၃၇ စောင် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ယင်း ပေးပို့သောစာ ၃၃၇ စောင် အနက် ၁၇၂ စောင်သာ ပြန်ကြားချက်ရရှိခဲ့သဖြင့် ၁၆၅ စောင် ပြန်ကြားရန် လိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။ ယင်းပြန်ကြားစာ ၂၇၉ စောင်အား အောက်ပါအတိုင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်-
(က) သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ပြန်လည် ညှိနှိုင်းမေးမြန်းခြင်း ၁၀ စောင်
(ခ) တိုင်တန်းသူများသို့ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်း ၂၂၉ စောင်
(ဂ) မှတ်တမ်းထားရှိခြင်း ၃၃ စောင်
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ပြန်ကြားစာ စောင့်ဆိုင်းခြင်း ၇ စောင်
၂၃။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများမှ ပြန်ကြားစာ ၂၇၉ စောင် လက်ခံရရှိခဲ့သည့်အနက် ၁၇၂ စောင်မှာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တိုင်း ဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ရုံးများသို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပေးပို့ခဲ့သည့်စာများကို ဤနှစ် အတွင်း ပြန်ကြားလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိသည့် ပြန်ကြားစာ ၁၀၇ စောင်မှာ ယခင်နှစ်များက ပေးပို့ခဲ့သော စာများအပေါ် ပြန်ကြားချက်များ ဖြစ်သည်ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည် –
(က) ၂၀၁၃ ခုနှစ် လက်ကျန်စာပြန်ကြားချက် ၁ စောင်
(ခ) ၂၀၁၅ ခုနှစ် လက်ကျန်စာပြန်ကြားချက် ၇ စောင်
(ဂ) ၂၀၁၆ ခုနှစ် လက်ကျန်စာပြန်ကြားချက် ၉၉ စောင် ပေါင်း ၁၀၇ စောင်
(ဃ) ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပေးပို့စာပြန်ကြားချက် ၁၇၂ စောင်
စုစုပေါင်းပြန်ကြားချက် ၂၇၉ စောင်
၂၄။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနမှ ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေးခဲ့ သည့်အကြိမ် ၂၆ ကြိမ် ရှိသည့်အနက် တိုင်တန်းချက်များအရ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည့် ကိစ္စရပ်များ မှာ ၁၈ ကြိမ်ဖြစ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည် –
(က) မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက္ခမီမြို့တွင် နေမင်းထွန်း (ခ) လှလေးစိန်အား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်၍ ဆိုင်ကယ်ခိုးသည်ဟု ဝန်ခံခိုင်းသည့်ကိစ္စ။ နေမင်းထွန်း (ခ) လှလေးစိန်၏ ခန္ဓာကိုယ် နှင့် လိင်အင်္ဂါတို့အား ကျင်စက်ဖြင့်တို့ပြီး ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်၍ ဆိုင်ကယ်ခိုးသည်ဟု ဝန်ခံခိုင်း ခြင်းကြောင့် ဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများအား အရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်း ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဘုန်းကြွယ် ဦးဆောင်သော ကွင်းဆင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ၁၈-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၀-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ မော်လမြိုင် မြို့၊ ကျိုက္ခမီမြို့၊ ပဲခူးမြို့များသို့ သွားရောက်၍ သက်သေ ၁၉ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံမေးမြန်း ခဲ့ကာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဥပဒေနှင့် အညီ အရေးယူသင့်ကြောင်းနှင့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ရဲလုပ်ငန်းများကို နည်းလမ်းတကျ ပြည့်စုံအောင် ဆောင်ရွက်စေသင့်ကြောင်းစသည့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်၏ Website တွင် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၂/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် ထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့၊ မြစံလေးရွာနေ စောလေ့ (ခ) မောင်ပုလဲ မတရား သတ်ဖြတ်ခံရ သည်ဟု စွပ်စွဲသည့်ကိစ္စ။ ယင်းတိုင်ကြားချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာ မြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၉-၄-၂၀၁၇ ရက်နေ့ မှ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့သို့ သွားရောက် ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် စောလေ့ (ခ) မောင်ပုလဲ သေဆုံးခဲ့ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး တာဝန်ရှိသူများကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ဖော်ထုတ်အရေးယူသင့် ကြောင်းစသည့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနသို့ မိတ္တူပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(ဂ) ကရင်ပြည်နယ်ရှိ မြေယာအငြင်းပွားမှုများ။ ကရင်ပြည်နယ်တွင် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်မှ မြေယာသိမ်းဆည်းမှုများကြောင့် ဒေသခံများဒုက္ခရောက်နေကြောင်း Human Rights Watch (HRW) အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာအရလည်းကောင်း၊ ကရင် ပြည်နယ် ဒေသခံများကို ကိုယ်စားပြု၍ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ အကြိမ်ကြိမ်တိုင်ကြားချက်များအရ လည်းကောင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာ မြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင် သောအဖွဲ့သည် ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့၊ ကော့ကရိတ်မြို့၊ မြဝတီမြို့များသို့ ၂၁-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ မှ ၂၅-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သွားရောက်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးအဆင့် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဦးဆောင် ပါဝင်ပြီး အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်း ဦးစီးဌာနနှင့် အခြားသက်ဆိုင်​သော ဦးစီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ ပါဝင် သည့်လုပ်ငန်းကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ လယ်ယာမြေများ ကို မြို့မြေကွက်အဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် မြေယာဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ် ထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ပြန်လည်တည့်မတ်ဆောင်ရွက် စေသင့်ကြောင်း စသည့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအား သိရှိနိုင်ရန် ကော်မရှင်ရုံး Website တွင် ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် (၁၅/ ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ဃ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သဲကုန်းမြို့တွင် မောင်မင်းမြတ်လွင် (ခ) အာနိုးဆိုသူအား ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များက ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မေးမြန်းသည့်ကိစ္စနှင့် အင်းမရဲစခန်းတွင် လူငယ် ၃ ဦးအား ရဲစခန်းမှူးမှ အရက်သောက်စားပြီး နှိပ်စက်မေးမြန်းသည့်ကိစ္စ။ ပထမ ကိစ္စရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ အကြောင်းကြားပေးပို့လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယကိစ္စ ရပ်မှာ တိုင်ကြားစာရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ၁၁-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၁၄-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သဲကုန်း မြို့နှင့် အင်းမမြို့များသို့ သွားရောက်ကွင်းဆင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး နစ်နာသူအား နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း၍ ဇွတ်အတင်း ဝန်ခံစေခြင်း ဖြင့်တရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ကျခံခဲ့ရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရှိသူများအား ထိုက်သင့်သလို အရေးယူသင့်ကြောင်းနှင့် သံသယရှိသူတစ်ဦးအား အထောက် အထား ခိုင်လုံမှုမရှိဘဲ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်၍ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းပြီး ဇွတ်အတင်း ဝန်ခံ စေ၍ တရားစွဲဆို တင်ပို့ခြင်း၊ တရားရုံးမှလည်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ကျခံစေသည့် ဖြစ်စဉ်မျိုး ထပ်မံ မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တရားစွဲ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် တရားစီရင်ရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ ညှိနှိုင်း၍ လိုအပ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ ချမှတ်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း စသည့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebookတွင် ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၀/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ အင်းမရဲစခန်းတွင် လူငယ် ၃ ဦးအား မူးယစ်သောက်စားပြီး ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် တာဝန်ရှိသူများအား စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရ လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်သင့် ကြောင်း၊ ရိုက်နှက် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ နှင့်တာဝန်ရှိ ကြီးကြပ်သူ အဆင့်ဆင့်ကို လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း စသည့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် (၁၁/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(င) လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော် အမြန်လမ်းဘေးရှိ ကျူးကျော်နေအိမ်များ ဖယ်ရှားခံရမှု။ လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ ကျူးကျော်အိမ်များ ဖယ်ရှားခံရမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၂၀-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့၊ ၂၁-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့နှင့် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့များတွင် လှည်းကူးမြို့နယ်သို့ သွား ရောက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်မှ အကြံပြုချက် များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ဆောင်ရွက်မှုကို ကော်မရှင်ရုံး Website တွင် ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် (၁၄/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသ ည်။
(စ) ဟင်္သာတအကျဉ်းထောင်တွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများရှိနေကြောင်း တိုင်ကြားချက်။ ဟင်္သာတအကျဉ်းထောင်ရှိ အကျဉ်းသားများ၏ အခက်အခဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခေတ္တညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဦးဘုန်းကြွယ် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၁၇-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၁၈-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ ယင်းအကျဉ်းထောင်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပြီးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ် နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၇/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် ကာယကံရှင်မှ ယင်းတိုင်ကြားချက်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
(ဆ) ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ သီလဝါရွာဟောင်းရှိ မြေကွက်အမှတ် (၁၂၊ ၁၃) မြေနေရာနှင့် လမ်းများကို လန်းပြီ-ပင်လယ်ရေကြောင်းကုမ္ပဏီမှ ခြံစည်းရိုးများကာရံလိုက်ခြင်း ကြောင့် လမ်းများပိတ်ဆို့သည့်ကိစ္စ ။ ကျောက်တန်းမဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အေးမြမြမျိုး၏ ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းအရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး၏ ၂၂-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲ ပါစာဖြင့် မေးမြန်းလာခြင်းကြောင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာ မြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ၂၂-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများအား စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှ တာဝန်ရှိသူများကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခြင်း၊ နစ်နာသူနှင့် တိုင်ကြားသူများအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ ပြုလုပ်ခဲ့ကာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ နစ်နာသူများက ထပ်မံတိုင်ကြားခြင်းကြောင့် လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့် အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် နိုင်ငံ သားများ၏ မူလအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုအား အသိပေး တင်ပြခဲ့ပါသည်။
(ဇ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သုံးခွမြို့၊ စပယ်ချောင်ကျေးရွာရှိ ကြက်မွေးမြူရေးခြံတွင် ကိုင်လားဆွန် (ခ) မောင်မြင့် သေဆုံးသည့်ကိစ္စ။ ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာမြင့်ကြည်တို့ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် သုံးခွမြို့ သို့ သွားရောက်ပြီး လိုအပ်သည့်သက်သေများအား စစ်ဆေးခြင်း၊ ကိုင်လားဆွန် (ခ) မောင်မြင့်သေဆုံးခဲ့သည့်စိန်သုံးလုံးဆန်စက်အနီးရှိကြက်မွေးမြူရေးခြံသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် သံသယ ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် အဆင့်မြင့် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင် သည့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး ပြန်လည်စစ်ဆေး အတည်ပြုသင့်ကြောင်း အကြံပြုချက် ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(ဈ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ မြို့မရဲစခန်း တာဝန်ရှိသူများက အချုပ် သား ဦးကျော်စိုးဦးအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည့်ကိစ္စ။ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ မြို့မ ရဲစခန်းရှိ တာဝန် ရှိသူများက ဦးကျော်စိုးဦးအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခေတ္တညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဦးဘုန်းကြွယ် ဦးဆောင်သော ကွင်းဆင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ၂၆-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ တာဝန်ရှိ သူများနှင့် နစ်နာသူတို့အား စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း များပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အမှုများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်စစ်ဆေးရာတွင် ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ချုပ်နှောင် စစ်ဆေးများကို ဆောလျင်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ သက်သေအထောက်အထား ခိုင်လုံပြည့်စုံမှသာ ရဲလုပ်ငန်း စနစ်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်စေသင့်ကြောင်းနှင့် စွပ်စွဲခံရသူအား နာကျင်စေမှု ဖြစ်စေခဲ့သော တာဝန်ရှိသူ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား လိုအပ်သလို အရေးယူ ဆောင်ရွက်စေသင့် ကြောင်း အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(ည) မကွေးမြို့မရဲစခန်း၊ အချုပ်ခန်းအတွင်း၌ ဦးသန်းထိုက်အောင် သေဆုံးခဲ့သည့်ကိစ္စ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာမြင့်ကြည် ဦးဆောင်သော ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ သည် မကွေးမြို့မရဲစခန်းရှိ အချုပ်ခန်းအတွင်း၌ ဦးသန်းထိုက်အောင် သေဆုံးခဲ့သည့်ကိစ္စ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ ၁-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၃-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အချုပ်သား သေဆုံးရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဆင့်မြင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ စစ်ဆေး ပြီး သေဆုံးသူ၏ မိသားစုအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရှင်းလင်းစေသင့်ကြောင်းနှင့် ယင်းဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက် ၍ တာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့်ကို စိစစ်ဖော်ထုတ် အရေးယူ သင့်ကြောင်း အကြံပြုချက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ လိပ်မူ၍ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ မိတ္တူပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၉/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ဋ) အင်းဗြောင်ကုန်ထုတ်စခန်းတွင် ကျောက်ပိပြီး အောက်ပိုင်းအရိုးနှင့် အသားများ ကျေသွား ခဲ့သော အကျဉ်းသားအား မည်သည့်ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမျှ ပြသပေးခြင်း မရှိ ကြောင်း တိုင်ကြားသည့်ကိစ္စ။ မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ အင်းဗြောင် ကုန်ထုတ် စခန်းတွင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကျောက်ပိပြီး ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းအရိုးနှင့် အသားများကြေသည့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော အကျဉ်းသားမောင်ရဲလွင်ထွန်း (ခ) မိုးဒီ အား ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းပြသ ပေးခြင်းမရှိကြောင်း တိုင်တန်းချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဘုန်းကြွယ် ဦးဆောင်သော ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေး ရေးအဖွဲ့သည် ၁၆-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၁၈-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ အင်းဗြောင် ကုန်ထုတ်စခန်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် ဒဏ်ရာရရှိသော အကျဉ်းသားအား ထိရောက်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိသည့်အတွက် တာဝန်ရှိသူ စခန်းတာဝန်ခံအား ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းနှင့် အကျဉ်းထောင်စခန်းများ ရှိ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ ဆေးရုံ၊ ဆရာဝန်၊ ဆရာမများ၏ တင်ပြအကြံပြုချက်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို အကျဉ်းထောင် တာဝန်ခံအရာရှိများက အလေးထား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေသင့် ကြောင်း အကြံပြုချက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် (၂၂/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ဌ) တရားခံ၏ရွှေထည်ပစ္စည်းများအား ရဲစခန်းမှ သိမ်းဆည်းထားပြီး တရားစွဲဆိုရာ တွင် သက်သေခံပစ္စည်းများကို မတင်သွင်းကြောင်း တိုင်ကြားလာသည့်ကိစ္စ။ ​ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာမြင့်ကြည် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၈-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့ တွင် သာကေတရဲစခန်း သို့ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် တာဝန်ရှိအမှုစစ်ရဲ အရာရှိ၊ မှုခင်းစာရေး၊ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံး၏ ဘီးလစ်စာရေးတို့အား လိုအပ်သလို အရေးယူ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အကြံပြုချက် ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ် စဉ် (၂၇/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ဍ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ဝေါမြို့နယ်၊ အဗျားဘိုတဲကျေးရွာနေ ဒေါ်ခင်မျိုးသင်းအား မဟုတ် မမှန် လုပ်ကြံတိုင်ကြားခံရသည့်ကိစ္စ။ တိုင်တန်းသူက ၎င်းအား မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ တိုင်ကြား ခံခဲ့ရပြီး မြဝတီမြို့နယ်နှင့် ဝေါမြို့နယ်တို့မှ ရဲအရာရှိများက မတရားဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးသို့ တိုင်တန်းချက်ပေးပို့ခဲ့ရာ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးမှ ကော်မရှင် သို့ပေးပို့လာသဖြင့် ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဘုန်းကြွယ် ဦးဆောင် သောအဖွဲ့သည် ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၁၃-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ ဝေါမြို့သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး တွေ့ရှိချက်နှင့် သုံးသပ်အကြံပြုချက်များကို အမျိုးသား လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် (၂၉/ကာကွယ်/ ၂၀၁၇) ဖြင့် ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ဎ) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်၊ ကိုးပင်သာစည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် အသက် မွေးမှု အတတ်သင်စခန်းတွင် အကျဉ်းသားတစ်ဦးအား တာဝန်ခံ တပ်ကြပ်က အနိုင်ကျင့် ရိုက်နှက် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း။ ကိုးပင်သာစည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် အသက်မွေးမှု အတတ်သင်စခန်းတွင် အကျဉ်းသား မောင်သိန်းဇော်အောင်အား တာဝန်ခံ တပ်ကြပ် အောင်ကျော်သန်းဆိုသူက အနိုင်ကျင့်ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သောကြောင့် အောက် နှုတ်ခမ်းကွဲပြီး ရှေ့အောက်သွားတစ်ချောင်း ပြုတ်ခဲ့သဖြင့် ထိရောက်စွာအရေးယူပေးပါရန် တိုင်ကြားလာခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာမြင့်ကြည် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ၂၃-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သရက် အကျဉ်းထောင်သို့ သွားရောက်၍ နစ်နာသူ အကျဉ်းသား မောင်သိန်းဇော်အောင် နှင့် ၎င်း၏ဖခင် (တိုင်တန်းသူ) တို့အား စစ်မေးခြင်း၊ ၂၄-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့နှင့် ၂၅-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့များတွင် ကိုးပင်သာစည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူ ရေးနှင့် အသက်မွေးမှုအတတ်သင်စခန်းသို့ ကွင်းဆင်းပြီး တာဝန်ရှိသူများအား စစ်ဆေး ခဲ့ပြီး စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါ သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၃၁/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ဏ) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်မြို့တွင် ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ဒေသခံ များအပေါ် ထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေသည့်ကိစ္စ။ မြိတ်မြို့တွင် MSPP ကုမ္ပဏီ၏ ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် ကရင်ရွာ ၄ ရွာရှိ လူဦးရေ ၄၄၈၀ ခန့် ကို ထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်ပြီး စိုက်ပျိုးမြေဧက ၆၀၀၀ ခန့် ဖယ်ရှားခံခဲ့ရကာ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူ့အခွင့် အရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်နေသော မြန်မာနိုင်ငံမှ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်း ၇ ခုက မလေးရှားနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သို့ တိုင်တန်း ခဲ့ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် သို့ အသိပေးအကြောင်းကြားလာသဖြင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာ မြင့်ကြည် တို့ ဦးဆောင်သော ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ၁၉-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ မြိတ်မြို့သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့၏ တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာန သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(တ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီမြို့၊ သာယာဝတီ ဗဟိုအကျဉ်းထောင်အတွင်း လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖောက်မှုများရှိနေကြောင်း တိုင်တန်းလာသည့်ကိစ္စ။ ယင်း တိုင်တန်းချက်အား နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) မှတဆင့် ပေးပို့လာ သဖြင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်၊ ဒေါက်တာမြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့နှင့် ၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ များတွင် သာယာဝတီဗဟိုအကျဉ်း ထောင်သို့ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(ထ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ မြန်မာ တာ့ရှင်း အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် စက်ရုံတာဝန်ခံက ခံဝန်လက်မှတ်များ ဖိအားပေး ရေးထိုးခိုင်းပြီး အလုပ်သမားအချို့အား အလုပ်ထုတ်ပစ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ် ဆောင်နေသည့်ကိစ္စ။ မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ မြန်မာတာ့ရှင်း အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် စက်ရုံတာဝန်ခံက အလုပ်သမားအချို့အား အလုပ်ထုတ်ပစ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခံဝန်လက်မှတ်များ ဖိအား ပေးရေးထိုးခိုင်းနေကြောင်း တိုင်ကြားလာသဖြင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်၊ ဒေါက်တာ မြင့်ကြည်တို့ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့နှင့် ၂-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့များတွင် အခင်းဖြစ်ပွားရာ စက်ရုံသို့ သွားရောက်ကွင်းဆင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အလုပ်ရှင်က လက်မှတ် ရေးထိုးခိုင်းသော ဝန်ခံကတိပြု ချက်တွင်ပါဝင်သည့် စက်ရုံစည်းကမ်းများတွင် EC စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့် ကွာဟမှုမရှိကြောင်း အလုပ်သမားများအား ရှင်းလင်းပြခြင်း၊ အလုပ်ရှင်ဘက်မှလည်း အချို့အချက်များကို ဖြေလျော့ပေးခြင်းများကို ပြုလုပ်ပြီး အလုပ်သမားများ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဆန္ဒပြ အလုပ်သမားများအား အလုပ်ပြန်လည် ဆင်းခွင့်မပြုလိုပါက နစ်နာကြေးကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအညီ ထုတ်ပေးနိုင်ရေး အလုပ်ရှင်အား စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန်စသည့် အကြံပြုချက် များအား သက်ဆိုင်ရာ ဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် (၁/ကာကွယ်/၂၀၁၈) ဖြင့် ကော်မရှင် ရုံး Website တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
၂၅။ တိုင်တန်းချက်အရမဟုတ်ဘဲ လူမှုကွန်ရက်မှ ရရှိသည့်သတင်းများအရ ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေး ခဲ့သည့် ကိစ္စရပ်များမှာ (၆) ကြိမ်ဖြစ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည် –
(က) ကိုရင်တစ်ပါးအား အဓမ္မသင်္ဃန်းချွတ်၍ လူအုပ်စုဖြင့် ဝိုင်းဝန်းထိုး ကြိတ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ။ ၂၃-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသူရကျော် ဦးဆောင် သော အဖွဲ့သည် ကိုရင်တစ်ပါးအား အဓမ္မ သင်္ဃန်းချွတ်၍ လူအုပ်စုဖြင့် ဝိုင်းဝန်းထိုး ကြိတ်ခဲ့သည့်အတွက် သွေးထွက်သံယိုဖြစ်ခဲ့သည့်သတင်းကို လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများတွင် တွေ့ရှိရခြင်း ကြောင့် အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်သို့ သွားရောက် ၍ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သဖြင့် မှတ်တမ်းတင် ထားခဲ့ပါသည်။
(ခ) အမရပူရမြို့နယ်၊ ဟိန်းအာကာ အပ်ချုပ်ဆိုင်တွင် အိမ်အကူ မအေးကြင် (၁၄ နှစ်) ကို ဆိုင်ရှင် ဇနီးမောင်နှံမှ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသည့်ကိစ္စ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရ မြို့နယ်၊ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်အနီး အပ်ချုပ်ဆိုင်တွင် အိမ်အကူလုပ်ကိုင်နေသည့် မအေးကြင်ကို ဆိုင်ရှင်ဇနီးမောင်နှံတို့က နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုမျိုးစုံ ပြုလုပ်ခဲ့ သည့်အပြင် အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးမှ အဆိုပါ မအေးကြင်၏ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်း ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ပြီး အိမ်ရှင်အမျိုးသား၏ ရှေ့တွင်ပြသခိုင်းခဲ့ကြောင်း လူမှုကွန်ရက်များတွင် တွေ့ရှိရသဖြင့် ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဘုန်းကြွယ် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီး၊ အမရပူရမြို့နယ်သို့ ၇-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၁၀-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သွားရောက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် လူမဆန်စွာ နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းခဲ့သည့် အိမ်ရှင်ဇနီးမောင်နှံအား ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက် သင့်ကြောင်းနှင့် ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားလာ သည့်အမှုကို ရဲလက်စွဲနှင့်အညီ တိကျစွာ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုဘဲ ပျက်ကွက်ခဲ့သော တာဝန်ရှိသူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူသင့်ကြောင်း စသည့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ကော်မရှင်ရုံး Website တွင် ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၇/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါသည်။
(ဂ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဂိတ်ဝင်းအတွင်း ရှိ စတိုးဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော အသက်မပြည့်သေးသည့် မိန်းကလေး ၂ ဦး အား ဆိုင်ရှင်ဖြစ်သူက ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည့်ကိစ္စ။ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး ဂိတ် ဝင်းအတွင်းရှိ ဆွေညီနောင်စတိုးဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်နေသော မထက်ထက်ဇော် (၁၂ နှစ်) နှင့် မမေသဇင် (၁၀ နှစ်) တို့အား ဆိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ဖြူဖြူထွန်း (ခ) မငယ် မှ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သည့်ကိစ္စကို လူမှုကွန်ရက်တွင်တွေ့ရှိရသဖြင့် ခေတ္တညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးဘုန်းကြွယ် ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့သည် ၁၄-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်သို့ သွားရောက် ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့များသည် ရဲလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို မှတ်တမ်း တင်သင့်ကြောင်းနှင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့မ ရဲစခန်း၏ဆောင် ရွက်ချက်ကို သင်ခန်းစာဖော်ထုတ်၍ တာဝန်ရှိသူအဖွဲ့အစည်းများသို့ စံနမူနာအဖြစ် ချပြဆောင်ရွက်ပေးသင့်ကြောင်းစသည့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ ပါသည်။ ကော်မရှင်ရုံး Website တွင် ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၈/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ဃ) ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်၊ ၉၄ ရပ်ကွက်၊ အေ ၆ လမ်းနေ အိမ်ရှင် ဖြစ်သူမှ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် အိမ်အကူ မိန်းကလေးငယ်အား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု။ ၂၀-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အထက်ပါအမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်သည် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ သွားရောက် စစ်ဆေး မေးမြန်းခဲ့ပြီး တိုင်းတရားသူကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့ အမှုနှောင့် နှေး ကြန့်ကြာမှု မဖြစ်စေရေးနှင့် နစ်နာသူအား လူ့အခွင့်အရေးအရ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု အပြည့်အဝရရှိစေရေး ညှိနှိုင်းမေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebookတွင် ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် (၁၆/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအမှုအား တရားရုံးတွင် တရားလိုပြသက်သေများ အား စစ်ဆေးဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(င) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ ကရုဏာကလေးများမေတ္တာရိပ်မြုံ ဂေဟာမှ ကလေးသူငယ် ၉ ဦးသည် ရိုက်နှက်ခြင်းကြောင့် မုံရွာမြို့ဘက်သို့ ထွက်ပြေးသွား သည့်ကိစ္စ။ ကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သော ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့သည် မှော်ဘီ မြို့နယ်ရှိ အဆိုပါ ကရုဏာကလေးများမေတ္တာရိပ်မြုံဂေဟာသို့ ၂၅-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် ကလေးများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်သည့်ဂေဟာတွင် စီမံအုပ်ချုပ်သူများအနေဖြင့် ကလေးများကို ဆုံးမရာ တွင် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြုမူဆုံးမခြင်းအစား ၎င်းတို့၏စိတ်ခံစားမှုကို နားလည်သဘော ပေါက် အောင်ကြိုးစားကာ မိသားစုသဖွယ် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြုပြင်ဆုံးမခြင်းများ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည် မိမိတို့၏ နယ်မြေအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော ပရဟိတဂေဟာများကို စာရင်းပြုစု၍ သက်ဆိုင်ရာ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာနနှင့်ညှိနှိုင်း၍ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သင့် ပါကြောင်းစသည့် အကြံပြုချက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် (၂၅/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(စ) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဓနုဖြူမြို့တွင် အရွယ်မရောက်သေးသည့် ကလေးငယ် ၂ ဦး အား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည့်ကိစ္စ။ ဓနုဖြူမြို့တွင် အရွယ်မရောက်သေးသည့် ကလေး ငယ် ၂ ဦးဖြစ်သော မထိုက်ထိုက်ထွန်း (၁၀ နှစ်) နှင့် မောင်ကံ (၆ နှစ်) တို့အား ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက် ခဲ့ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှကြားသိရသဖြင့်ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဘုန်းကြွယ် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ ရက် နေ့နှင့် ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့များတွင် ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် မြို့နယ်ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်တွင်ပါရှိသည့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကလေးသူငယ် မှုခင်းများ မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်း အစီအမံများ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည့် မှုခင်း တစ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခဲ့သော မြို့မရဲစခန်းမှူးအား ထိုက်သင့်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း စသည့်အကြံပြုချက်များအား သက်ဆိုင် ရာ ဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခံ ခဲ့ရသော ကလေးနှစ်ဦးအား ဆေးကုသပေးနေသည့် ပုသိမ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက်၍ တွေ့ဆုံနှစ်သိမ့် အားပေးစကား ပြောကြားပြီး ကော်မရှင်မှ ထောက်ပံ့ ငွေကျပ် တစ်သိန်းစီကို တိုင်းလူမှု ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးမှတစ်ဆင့် ကလေး ငယ် ၂ ဦးသို့ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးအနက် မထိုက်ထိုက်ထွန်း (၁၀ နှစ်) မှာ ညှဉ်းပန်းသူ ရဲလေး၏ သမီးအရင်းဖြစ်ပြီး၊ မောင်ကံဆိုသူမှာ ရဲလေး ၏ တူတော်စပ်ပါသည်။ မောင်ကံသည်၎င်း၏အစ်မ မဝင်းသီရိနှင့်အတူ ပထွေးနှင့် နေထိုင်ရာ မိခင် သေဆုံးသွား သဖြင့် အစ်မဖြစ်သူ မဝင်းသီရိ (၁၁ နှစ်) အား ပထွေး ဖြစ်သူနှင့်အတူ ဆက်လက်နေထိုင်ရန် မသင့်လျော်သည့်အပြင် ပထွေးဖြစ်သူ ကိုယ်တိုင်မှလည်း ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရန် မတတ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် (၃၆/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တို့တွင် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
၂၆။ တိုင်တန်းချက်အရမဟုတ်ဘဲ ထူးခြားသော အခြေအနေအရ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုလေ့လာရန် လိုအပ်သဖြင့် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုလေ့လာမှု (၂) ကြိမ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည် –
(က) ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး ထိခိုက်နစ်နာမှုများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာမြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် လူ့အခွင့်အရေးထိခိုက် နစ်နာမှုများ အခြေအနေကို လေ့လာရန် ၂၄-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၉-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ ယင်းဒေသသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့ပြီး တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် ကျန်ရှိနေသော ဘင်္ဂါလီများနှင့် တိုင်းရင်းသား များအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ ၎င်းတို့သားသမီးများ၏ပညာရေးအပါအဝင် အဆိုပါဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသင့်ကြောင်း စသည့် အကြံပြုချက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၁၇) ကို ၃-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် သတင်းထုတ် ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ခ) ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်များသို့ ဒုတိယအကြိမ်သွား ရောက် လေ့လာကြည့်ရှုခြင်း။ အဆိုပါဒေသရှိ ရခိုင်၊ မြို၊ ခမီ၊ ဒိုင်းနက်၊ ကမန်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးတို့၏ လူ့အခွင့်အရေး ထိခိုက်မှုများ ရှိ မရှိ စက်တင်ဘာလအတွင်းက သွားရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့ပြီးနောက် တိုးတက်မှုအခြေအနေများကို လေ့လာ သိရှိနိုင်ရန်အတွက်ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာမြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၁၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများ တိုးတက်မှု ရှိ မရှိနှင့် တဖက်နိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးသွားသော မွတ်စလင် ဘာသာဝင် ဘင်္ဂါလီများ ပြန်လည် လက်ခံရေး ပြင်ဆင်ထားမှု အခြေအနေများကို ထပ်မံ သွားရောက်ကြည့်ရှု လေ့လခဲ့ပါသည်။ ကြည့်ရှုလေ့လာရေးအဖွဲ့၏ တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ် ချက်နှင့် နေရပ်စွန့်ခွာ သွားသည့် ဘင်္ဂါလီများအား ပြန်လည်လက်ခံရေးအစီအစဉ်အရ ဝင်ရောက်လာမည့် ဘင်္ဂါလီများကို အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့်ပြုမည့် နေရာများအား ရေရှည်လုံခြုံရေး အမြင်ဖြင့် သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ရန်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရန်နှင့် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးအခက်အခဲများ အဆင်ပြေစေရေး ဆောင်ရွက် ပေးရန် စသည့် အကြံပြုချက်များအား နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၁၇) ဖြင့် ၁၀-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင် ရုံး Website တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ဂ) ယင်းတင်ပြခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၇‑၁၂‑၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်တို့သည် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မြေပြင်အတွေ့အကြုံများကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။
(ဃ) ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကြောင့် နမ္မတူမြို့နှင့် သီပေါမြို့သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် ခဲ့ကြသည့် ဒေသခံ ပြည်သူ ဦးရေ ၃၀၀၀ ခန့်အား ကော်မရှင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့မှ သွားရောက် ကြည့်ရှုရန် လျာထားစီစဉ်ခဲ့သော်လည်း လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသော ကြောင့် သွားရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၇ တိုင်တန်းချက်များပါ အမှုအမျိုးအစားများ
စဉ် အကြောင်းအရာ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ စုစုပေါင်း
၁ မြေယာသိမ်းဆည်းမှုနှင့်ဆိုင်သောကိစ္စ ၆၂၆ ၂၇၄ ၁၃၆ ၁၀၃၆
၂ တရားရေးနှင့်ဆိုင်သောကိစ္စ ၁၄၁ ၈၀ ၄၁ ၂၆၂
၃ ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်ဆိုင်သောကိစ္စ ၉၂ ၃၆ ၃၀ ၁၅၈
၄ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ဆိုင်သောကိစ္စ ၇၃ ၄၃ ၇၁ ၁၈၇
၅ မြို့/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ဆိုင်သောကိစ္စ ၅၃ ၂၄ ၁၀ ၈၇
၆ အမျိုးသမီး၊ အလုပ်သမားနှင့် သာသနာရေးဆိုင်ရာ ၄၄ ၁၉ ၃၁ ၉၄
၇ ငွေကြေးနှင့်ဆိုင်သောကိစ္စ ၃၆ ၂၅ ၁၄ ၇၅
၈ စည်ပင်နှင့်ဆိုင်သောကိစ္စ ၄၄ ၁၅ ၁၄ ၇၃
၉ အကြမ်းဖက်၊ အကျဉ်းထောင်နှင့် လူကုန်ကူးဆိုင်ရာ ၁၃ ၁၅ ၁၇ ၄၅
၁၀ အခြားကိစ္စများ ၁၆၅ ၈၀ ၉၀ ၃၃၅
စုစုပေါင်း ၁၂၈၇ ၆၁၁ ၄၅၄ ၂၃၅၂
၂၇။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ လက်ခံစိစစ်ခဲ့သော တိုင်တန်းချက်များမှာ ၂၃၅၂ မှု ရှိကာ ၎င်းတို့အား အမှုအမျိုးအစား ခွဲခြားမည်ဆိုပါက မြေယာသိမ်းဆည်းမှုနှင့် ဆိုင်သောကိစ္စမှာ ၁၀၃၆ မှုဖြစ်ပြီး ၃ နှစ်အတွင်း လက်ခံစိစစ်ခဲ့သော တိုင်တန်းချက်များ၏ ၄၄.၀၄% ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ရဲနှင့် ဆိုင်သော ကိစ္စမှာ ၁၈၇ မှုဖြစ်၍ ဒုတိယအများဆုံး အမှုအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၃ နှစ်အတွင်း လက်ခံ စိစစ်ခဲ့ သည့် တိုင်တန်းချက်များ၏ ၇.၉၅% ဖြစ်ပါသည်။ တရားရေးနှင့်ဆိုင်သော အမှုမှာ ၂၆၂ မှုဖြစ်ပြီး ၁၁.၁၃ % ဖြစ်ပါသည်။
၂၈။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း တိုင်တန်းချက်များကို စိစစ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် လွှတ်တော်အသီးသီးမှ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သို့ အောက်ပါအတိုင်း အမှုတွဲများ လွှဲပြောင်း ပေးပို့ခဲ့ရာ ကော်မရှင်မှ စိစစ်ပြီး တိုင်တန်းချက်ပါ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာများသို့ ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေးပြီး တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရုံးများသို့ ပြန်ကြားခဲ့ပါသည်-
(က) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ် ရေးကော်မရှင်မှ လွှဲပြောင်းပေးပို့သော တိုင်တန်းချက် ၁ စောင်၊
(ခ) အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့် အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ လွှဲပြောင်းပေးပို့သော တိုင်တန်းချက် ၁ စောင်နှင့်
(ဂ) ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံသားများ မူလအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ လွှဲပြောင်းပေးပို့ သော တိုင်တန်းချက် ၉ စောင်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
၂၉။ အကျဉ်းထောင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို မြန်မာ နိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့်ပူးပေါင်း၍ ပြုလုပ်ရန်အတွက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်​ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) မှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးယုလွင်အောင်၊ ဦးညွန့်ဆွေနှင့် ဦးခင်မောင်လေး တို့ဦးဆောင်၍ ကော်မရှင်ရုံး၌ ၁၄-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်များကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် နေပြည်တော် ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် လျာထားသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။
၃၀။ အကျဉ်းထောင်များနှင့် အလုပ်စခန်းများ လေ့လာကြည့်ရှုမှုအတွက် ကောင်းမွန်သော အလေ့အထ ကောင်းများ ဝေမျှဖလှယ်သည့် လုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲကို ICRC နှင့် ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်ရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ICRC မှတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာန တာဝန်ခံ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် များဖြစ်ကြသော ဦးယုလွင်အောင်၊ ဒေါက်တာမြင့်ကြည်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တွင် အကျဉ်းထောင်များသို့ လှည့်လည်လေ့လာကြည့်ရှုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အကျဉ်းသားများ အား သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ICRC မှ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကော်မရှင်မှ အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အလုပ်စခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရေးစခန်းများ လှည့်လည်ကြည့်ရှုရာတွင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏အတွေ့အကြုံများကို အမြင်ချင်း ဖလှယ်၍ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၃၁။ The Prisons Act (India Act 9, 1894, Vol.I), The Prisons Act (India Act 3, 1900, Vol.I), နှင့် The Identification of Prisoners Act ( India Act 33, 1920, Vol.I) တို့အား အကျဉ်း ထောင်များ ဥပဒေ (မူကြမ်း) အဖြစ် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၇-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် (I-11)၊ ​လွှတ်တော်ဝင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင် တက်ရောက် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။
အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ ရဲအချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစခန်းများသို့ ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်း
၃၂။ အောက်ပါအတိုင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည် –
(က) ညောင်ဦးနှင့် မြင်းခြံမြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်း နှင့် ဆေးရုံအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာ မြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦးမြို့နှင့် မြင်းခြံမြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံး အချုပ်ခန်းနှင့် ဆေးရုံအချုပ်ခန်းတို့အား ၉-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၁၃-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာန သို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ကော်မရှင်၏ Website တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် (၂/၂၀၁၇) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ခ) ဟင်္သာတမြို့ရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းနှင့် ဆေးရုံအချုပ် ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာမြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင် သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ဟင်္သာတမြို့ရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်း၊ ဆေးရုံအချုပ် ခန်းနှင့် ဘိုးဘွား ရိပ်သာတို့အား ၂၄-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၇-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ကော်မရှင်၏ Website တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် (၃/၂၀၁၇) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ဂ) စစ်တွေနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ် ခန်းနှင့် ဆေးရုံအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာ မြင့်ကြည် တို့ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံး အချုပ်ခန်းနှင့် ဆေးရုံ အချုပ်ခန်းများအား ၅-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၈-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ကော်မရှင် Website တွင် ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၄/ ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(ဃ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှေလှော်အင်းနှင့် မင်းကုန်းစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် အသက် မွေးမှု အတတ်သင်စခန်းနှင့် လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ ရဲအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းနှင့် ဆေးရုံအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာမြင့်ကြည် ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှု စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊လှေလှော်အင်း၊ မင်းကုန်း စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နှင့် အသက်မွေးမှု အတတ်သင်စခန်း၊ လှည်းကူးမြို့နယ် ရဲစခန်း အချုပ်ခန်း၊ တရားရုံး အချုပ်ခန်းတို့အား ၂၃-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ကော်မရှင် Website တွင် ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၆/ ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(င) သင်္ဃန်းကျွန်းနှင့် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ် ခန်းနှင့် ဆေးရုံအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင် ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ရေးအဖွဲ့သည်သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းအချုပ်ခန်း၊တရားရုံးအချုပ်ခန်း၊ သုဝဏ္ဏနယ်မြေရဲစခန်း အချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်း၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရဲစခန်းအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံး အချုပ်ခန်းများကို ၂၇-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ကော်မရှင် Website တွင် ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၆/ ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(စ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွံတေးမြို့၊ တောကြီးတန်း အလုပ်စခန်းနှင့်ရွှေသူဋ္ဌေးအလုပ် စခန်း။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာမြင့်ကြည် ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တောကြီးတန်းနှင့် ရွှေသူဋ္ဌေး အလုပ်စခန်း၊ တွံတေးမြို့မ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းနှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းတို့အား ၆-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(ဆ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံတားမြို့နှင့် လသာမြို့ရှိ ရဲအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံး အချုပ်ခန်းနှင့် ဆေးရုံအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင် ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကျောက်တံတားမြို့နှင့် လသာမြို့၊ မြို့မရဲစခန်း အချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းနှင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အချုပ်ခန်းတို့အား ၉-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(ဇ) အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်၊ အင်းစိန်မြို့မ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းနှင့် အင်းစိန်မြို့နယ် တရားရုံးအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာမြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် အင်းစိန် ဗဟိုအကျဉ်းထောင်၊ အင်းစိန်မြို့မ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းနှင့် အင်းစိန်မြို့နယ် တရားရုံးအချုပ်ခန်းတို့အား ၁၄-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့ တွင် သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်ရုံး Website တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။
(ဈ) မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နှင့် တောင်ဒဂုံမြို့ရှိ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်း၊ ဆေးရုံအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးယုလွင်အောင် ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှု စစ်ဆေး ရေးအဖွဲ့သည် မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့မရဲစခန်းအချုပ်ခန်း၊ တောင်ဒဂုံမြို့မရဲစခန်းအချုပ် ခန်း၊ မြောက်ဒဂုံ မြို့မရဲစခန်းအချုပ်ခန်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပ တရားရုံး အချုပ်ခန်း၊ တောင် ဒဂုံတရားရုံး အချုပ်ခန်း၊ မြောက်ဒဂုံတရားရုံးအချုပ်ခန်းတို့အား ၁၆-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(ည) ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့ အကျဉ်းထောင်နှင့် ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစစ်မြိုင် ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် လားရှိုးမြို့ အကျဉ်းထောင် နှင့် ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းတို့အား ၂၀-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ ပါသည်။
(ဋ) မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်၊ မြစ်ကြီးနား မြို့မရဲစခန်းအချုပ်ခန်း၊ နယ်မြေရဲစခန်း အချုပ်ခန်း နှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြနှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်တို့ ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် မြစ်ကြီးနားအကျဉ်း ထောင်၊ မြစ်ကြီးနား မြို့မရဲစခန်း အချုပ်ခန်း၊ နယ်မြေရဲစခန်း အချုပ်ခန်းနှင့် တရားရုံး အချုပ်ခန်းတို့အား ၂၄-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် နှင့်အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ကော်မရှင်ရုံး Website တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။
(ဌ) ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နှင့် သံတွဲမြို့ရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းများ နှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးယုလွင်အောင်၊ ဒေါက်တာ မြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်း အချုပ်ခန်းများနှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်း၊ သံတွဲမြို့ရှိ အကျဉ်း ထောင်၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းများနှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းတို့အား ၂၈-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၃၁-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ ပါသည်။ ကော်မရှင်ရုံး Website တွင် ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၉/ ကာကွယ်/ ၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ဍ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်မြို့နယ်ရှိ အောင်ချမ်းသာအလုပ်စခန်း၊ မြို့မရဲစခန်း နှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင် ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှု စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် အောင်ချမ်းသာအလုပ်စခန်း၊ သံလျင်မြို့မရဲစခန်းနှင့် မြို့နယ် တရားရုံးအချုပ်ခန်းတို့အား ၇-၄-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါ သည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(ဎ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းနှင့် ကမာရွတ်မြို့နယ်များရှိ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံး အချုပ်ခန်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင် နှင့် ဒေါက်တာမြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် မရမ်းကုန်း မြို့နယ်နှင့် ကမာရွတ်မြို့နယ်များအတွင်းရှိ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးအချုပ်ခန်းတို့အား ၃-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(ဏ) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေး၊ တမူး၊ မုံရွာဒေသရှိ အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ ရဲအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းနှင့် ဆေးရုံအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာမြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့သည် ကလေး၊ မုံရွာအကျဉ်းထောင်များ၊တမူး ရဲအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံး အချုပ်ခန်း နှင့် ဆေးရုံ အချုပ်ခန်း၊ သနန်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် အသက်မွေးမှု အတတ်သင်စခန်း၊ အုတ်ဖိုကန် ဘောင်စခန်း၊ မြို့သစ် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် အသက်မွေးမှု အတတ်သင်စခန်း၊ ဗန္ဓုလ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် အသက်မွေးမှု အတတ်သင်စခန်း၊ ရာဇဂြိုဟ် (၁) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နှင့် အသက်မွေးမှုအတတ်သင်စခန်းနှင့် ရာဇဂြိုဟ် (၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် အသက်မွေးမှု အတတ်သင်စခန်းတို့အား ၁၂-၅-၂၀၁၇ ရက် နေ့မှ ၁၇-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ကော်မရှင်ရုံး Website တွင် ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၂/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(တ) ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျိုင်းတုံမြို့၊ မိုင်းဆတ်မြို့နှင့် တာချီလိတ်မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းနှင့် ဆေးရုံအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာမြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်နှင့် တာချီလိတ်မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်း အချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းနှင့် ဆေးရုံအချုပ်ခန်းများ သို့ ၁၉-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၂-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက် များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ကာ ကော်မရှင်ရုံး Website တွင် သတင်းထုတ် ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၃/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။
(ထ) မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နှင့် ကျိုက်ထိုမြို့ရှိ အကျဉ်းထောင်နှင့် အလုပ်စခန်းများ၊ တရားရုံး အချုပ်ခန်းနှင့် ရဲအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာ မြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် သထုံအကျဉ်း ထောင်နှင့် ကုန်ထုတ်စခန်း ၅ ခု၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးစခန်း ၁ ခု၊ ရဲ အချုပ်ခန်းနှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းတို့အား ၁၆-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၁၈-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သွား ရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ဆောင်ရွက်မှုများကို သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၁၈/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် သတင်းထုတ် ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ဒ) ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ရှိ သီပေါနှင့် လားရှိုးမြို့ရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်း အချုပ်ခန်း များ၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းများနှင့်ဆေးရုံအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင် နှင့်ဒေါက်တာမြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် သီပေါနှင့် လားရှိုး မြို့ရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းများ၊ တရားရုံး အချုပ်ခန်းများ၊ ဆေးရုံအချုပ်ခန်း များနှင့် ဘိုးဘွားရိပ်သာနှင့် ပရဟိတ ဂေဟာများ အား ၇-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၁၁-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး တွေ့ရှိချက်၊ အကြံပြုချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်များ အား သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ် စဉ် (၂၀/ကာကွယ်/၂၀၁၇) နှင့် (၂၁/ကာကွယ်/၂၀၁၇) တို့ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါသည်။
(ဓ) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြမြို့နှင့် ပုသိမ်မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်း အချုပ်ခန်း၊ ဆေးရုံအချုပ်ခန်းနှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းများ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာများနှင့် ပရဟိတ ဂေဟာများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာမြင့်ကြည် တို့ဦးဆောင် သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် မြောင်းမြမြို့နှင့် ပုသိမ်မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်း၊ ဆေးရုံအချုပ်ခန်းနှင့် တရားရုံး အချုပ်ခန်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြမြို့နှင့် ပုသိမ်မြို့များရှိ ဘိုးဘွားရိပ်သာများနှင့် ပရဟိတဂေဟာတို့အား ၂၂-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၄-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သွားရောက် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်၊ အကြံပြုချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် (၂၃/ကာကွယ်/ ၂၀၁၇) နှင့် (၂၄/ကာကွယ်/၂၀၁၇) တို့ ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(န) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မန္တလေးဗဟိုအကျဉ်းထောင်၊ ကုန်ထုတ်စခန်းများ၊ ရဲစခန်း အချုပ်ခန်းများ၊ ဆေးရုံအချုပ်ခန်းနှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင် ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးရှိ မန္တလေးဗဟိုအကျဉ်းထောင်၊ ကုန်ထုတ်စခန်းများ၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းများ၊ ဆေးရုံ အချုပ်ခန်းနှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းများအား ၁၁-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၁၅-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ အကြံပြုချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် (၂၈/ ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်းထုတ် ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ပ) ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေ၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသရှိ အကျဉ်းထောင်နှင့် အချုပ် ခန်းများ၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းနှင့် ဆေးရုံအချုပ်ခန်းများ။ ၂၈-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်၊ ဒေါက်တာမြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှု စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင် အကျဉ်းထောင်သို့ ၂၈-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး တွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(ဖ) ရမည်းသင်းနှင့် တောင်ငူမြို့ရှိ အကျဉ်းထောင်များ၊ ကုန်ထုတ်စခန်းများ၊ နေပြည်တော် အချုပ်ထောင်၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းများ၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင် ခေါင်းဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရမည်းသင်းမြို့ နှင့် တောင်ငူမြို့ရှိ အကျဉ်းထောင်များ၊ ကုန်ထုတ်စခန်းများ၊ နေပြည်တော် အချုပ်ထောင်၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းများ၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းများအား ၂၃-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နှင့် ၂၆-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက် များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၃၀/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ဗ) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်မြို့အကျဉ်းထောင်နှင့် ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်ရှိ ကိုးပင် သာစည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် အသက်မွေးမှု အတတ်သင်စခန်း။ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ မြင့်ကြည် ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် သရက်အကျဉ်းထောင်နှင့် ကိုးပင် သာစည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် အသက်မွေးမှု အတတ်သင်စခန်းကို ၂၃-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့ တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၃၃/ကာကွယ်/ ၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ဘ) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်မြို့နှင့် ကော့သောင်းမြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်း အချုပ်ခန်းနှင့်တရားရုံးအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာ မြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် မြိတ်မြို့နှင့် ကော့သောင်း မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းနှင့် တရားရုံး အချုပ် ခန်းများသို့ ၂၂-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၄-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့၏ တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၃၃/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။
(မ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံး အချုပ်ခန်းနှင့် ဆေးရုံအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်၊ ဒေါက်တာ မြင့်ကြည်တို့ ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံး အချုပ်ခန်းနှင့် ဆေးရုံအချုပ်ခန်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြု ချက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၃၄/ကာကွယ်/ ၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။
(ယ) ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်း အချုပ် ခန်းများနှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းများ။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်နှင့် ဒေါက်တာ မြင့်ကြည်တို့ဦးဆောင်သော ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် စစ်တွေနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့ များရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းများနှင့် တရားရုံး အချုပ်ခန်းများအား ၁၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၁၄-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့၏ တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ ပါသည်။ ကော်မရှင်ရုံး Website နှင့် Facebook တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၃၅/ကာကွယ်/၂၀၁၇) ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
၃၃။ အိမ်အကူမိန်းကလေးငယ်အား သွား ၆ ချောင်းကျိုး သည်အထိ ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှု ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာမြင့်ကြည် ဦးဆောင်သော ကော်မရှင်ရုံး ဝန်ထမ်းများ နှင့်အတူ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကာယကံရှင် မိန်းကလေး၂ ဦး၊ မိန်းကလေး၏ မိခင် ဒေါ်ခင်အုန်းကြည်၊ တိုင်တန်းသူဒေါ်ခင်ဝင်း၊ လိုက်ပါကူညီသူ ပရိဘောဂလုပ်ငန်းရှင် ဦးနေလင်း (ခ) ဦးဘောဂ၊ တိုင်တန်းခံရသူ အိမ်ရှင် ဒေါ်ခင်နန်းတင့်နှင့် ကလေးများအား ပို့ဆောင်ပေးသူ ဒေါ်စိုးဥမ္မာလှိုင် တို့အား ၂၄-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်ရုံး၌ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ ပြီးနောက် ၎င်းတို့၏သက်သေ ထွက်ဆိုချက်များကို လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ အမှုတွဲလွှဲပြောင်း ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်၏ Website တွင် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၇/ကာကွယ်) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ချက် ၃၆ ခုနှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၁၄ ခုတို့ကို ကော်မရှင် Website တွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရှေ့အလားအလာများ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း
၇၉။ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စအပေါ် လွတ်လပ်မှုအခြေခံဖြင့် အမြင်ချင်းဖလှယ်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်က ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ “ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရှေ့အလားအလာများ ဆွေးနွေးပွဲ” ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက် နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ Summit Parkview ဟိုတယ်၌ ကျင်းပရာ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပြည်တွင်း NGOs ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ ပါဝင်တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်း ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၂၄-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၉-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာ တွေ့ရှိချက်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး ဆောင်ရွက်မှု အတွေ့အကြုံများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့် သတင်းမီဒီယာ၏အခန်းကဏ္ဍ စသည်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပဆက်ဆံရေးအပေါ် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စ၏ သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ဆက်ဆံရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အပါအဝင် အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံ၊ ဥရောပသမဂ္ဂဆက်ဆံရေး စသည်တို့ကိုလည်းကောင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အတွေ့ အကြုံရှိ သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များက ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်ကြသူများက မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်း၊ သုံးသပ် ခြင်းနှင့် အကြံပြုခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးသုံးသပ်အကြုံပြုချက်များကို မြန်မာ နိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ အစီရင်ခံ တင်ပြခဲ့ပါသည်။
၉၄။ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးချဲ့မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အများပြည်သူလက်လှမ်းမီ တိုင်ကြားနိုင်ရေးနှင့် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၅၇ နှင့်အညီ နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ကော်မရှင်ယာယီရုံးခွဲ ၂ ရုံးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ အတွင်း ဖွင့်လှစ်ပြီး ဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ကာ ရုံးလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
(က) နေပြည်တော်။ ကော်မရှင်ရုံးခွဲ (နေပြည်တော်) ကို ဒက္ခိဏခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန စုပေါင်းရုံး၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လမှစ၍ ယာယီရုံးခန်း ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ရုံးခွဲဆောက်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ ဇမ္ဗူသီရိ မြို့နယ်၊ ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက်၊ သဇင်လမ်းနှင့် ဇော်ဂျီလမ်းထောင့် ပေ (၁၀၀ x ၁၀၀) မြေနေရာအား ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ရုံးခွဲ အဆောက်အဦနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အဆောက်အဦ များ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေရရှိပြီးဖြစ်၍ အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်နိုင်ရေးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှစတင်၍ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ခ) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ကော်မရှင် ရုံးခွဲ (မန္တလေး) ကို မန္တလေးမြို့၊ နန်းရှေ့ဈေး အပေါ်ထပ်တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လမှစ၍ ယာယီရုံးခန်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ရုံးခွဲ အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ မန္တလေးခရိုင်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ဒေးဝန်းအနောက်ရပ်ကွက်ရှိ အကွက် အမှတ် (၃၂၂ – ၃၂၃ – ၃၂၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ် ၃၅ တွင် ဧရိယာ ဧက (၀.၀၇၀၉) ဧကရှိ မြေနေရာအား နှစ် ၃၀ မြေငှားဂရန်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က ရရှိပြီးဖြစ်ရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်းရုံးနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်းများ စစ်ဆေးမှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်
၁၀၈။ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနမှ ကြည့်ရှု စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း၌ နေပြည်တော်အချုပ်ထောင် အပါအဝင် အကျဉ်းထောင်ပေါင်း ၂၆ ခုအား အကြိမ် ၃၀ စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကျဉ်း ထောင်ပေါင်း ၄၆ ခုရှိသည့်အနက် ၃၂ ခုအား စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သဖြင့် ကျန်ရှိနေသော အကျဉ်းထောင် ၁၄ ခုအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ဆက်လက် စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ဆေးသည့် အကြိမ် အရေအတွက်ဖြင့် ဖော်ပြရမည်ဆိုပါက ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၁၁ ကြိမ်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၈ ကြိမ်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၃၀ ကြိမ် စုစုပေါင်း ၄၉ ကြိမ် စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အကျဉ်းထောင် စစ်ဆေးမှုသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကထက် ၃ ဆနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကထက် ၄ ဆနီးပါး တိုးတက် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အချို့အကျဉ်းထောင်များအား လိုအပ်ချက်အရ မူလတစ်ကြိမ်အပြင် အောက်ပါအတိုင်း ထပ်မံစစ်ဆေးမှု များ ပြုလုပ်ခဲ့ရပါသည် –
(က) အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင် ၂ ကြိမ်
(ခ) မန္တလေးဗဟိုအကျဉ်းထောင် ၁ ကြိမ်
(ဂ) သာယာဝတီဗဟိုအကျဉ်းထောင် ၁ ကြိမ်
(ဃ) မြင်းခြံအကျဉ်းထောင် ၂ ကြိမ်
(င) တောင်ငူအကျဉ်းထောင် ၁ ကြိမ်
(စ) လားရှိုးအကျဉ်းထောင် ၂ ကြိမ်
(ဆ) မိုင်းဆတ်အကျဉ်းထောင် ၁ ကြိမ်
(ဇ) စစ်တွေအကျဉ်းထောင် ၂ ကြိမ်
(ဈ) ဘူးသီးတောင်အကျဉ်းထောင် ၂ ကြိမ်
(ည) မြိတ်အကျဉ်းထောင် ၁ ကြိမ်
(ဋ) ကော့သောင်းအကျဉ်းထောင် ၁ ကြိမ်
(ဌ) မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင် ၁ ကြိမ်
စုစုပေါင်း ထပ်မံစစ်ဆေးသည့်အကြိမ်ရေ ၁၇ ကြိမ်
၁၀၉။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည့် အကျဉ်းထောင် ၂၆ ခုတွင် ဝင်ဆံ့အင်အား ၃၁၃၄၀ ဦး ရှိသော်လည်း အကျဉ်းသားဦးရေ ၅၀၀၄၂ ဦး ထိန်းသိမ်းထားရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ ရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဝင်ဆံ့အင်အားထက် ၁၈၇၀၂ ဦး ပိုမိုနေသဖြင့် ၃၇.၃၇ % ပိုလျှံနေပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဝင်ဆံ့အင်အားထက် ပိုလျှံနေခြင်းသည် အကျဉ်းထောင် အုပ်ချုပ်သူများအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်စေ သကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေ ပြုန်းတီးမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထို့ကဲ့သို့ အကျဉ်းသား ကြပ်တည်းမှုကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ ထောင်တွင်းရာဇဝတ်မှုများ၊ ဆူပူမှုများ၊ ထောင်ဖောက် ထွက်ပြေးမှု များစသည့် မလိုလားအပ်သည့်ပြဿနာများ ဖန်တီးလာခြင်းကိုလည်း ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ဟု သုံးသပ် ရရှိပါသည်။
၁၁၀။ အထက်ဖော်ပြပါ စစ်ဆေးခဲ့သည့် အကျဉ်းထောင် ၂၆ ခုတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိသော အကျဉ်း သားနှင့် အချုပ်သားများအနက် မူးယစ်ဆေးဝါးဥပဒေဖြင့် အကျဉ်းကျ၊ အချုပ်ခံနေရသော အကျဉ်းသား၊ အချုပ်သား ဦးရေမှာ ၂၃၂၈၇ ဦး ရှိနေသဖြင့် စုစုပေါင်း အကျဉ်းသားဦးရေ၏ ၄၆.၅၃ % ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ 
ဝင်ဆံ့မှုထက် ကျော်လွန်နေသော အကျဉ်းသားဦးရေ အခြေအနေ
မှတ်ချက်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ကော်မရှင်မှ စစ်ဆေးခဲ့သော အကျဉ်းထောင် ၂၆ ခု အပေါ် သုံးသပ်ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
၁၁၁။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အကျဉ်းသားဦးရေ လျှော့ချရေးကို စဉ်းစားစီမံ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ လျှော့ချရာတွင်လည်း အများပြည်သူ၏ လူ့အခွင့်အရေးကို ထိခိုက်နစ်နာမှုများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရာဇဝတ်မှုကြီးများ ကျူးလွန်ခဲ့သဖြင့် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရသူများ ပါဝင်လွတ်မြောက် မသွား စေရေးကို သတိပြုဆောင်ရွက်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ပမာဏအနည်းငယ်သာမိသူများ၊ လက်ဝယ်မမိဘဲ အခြားသူနှင့် အတူရှိနေသဖြင့် အရေးယူခံရသူများ၊ သံသယကြောင့် အကျဉ်းကျခံရသူများ၊ အစဉ်အလာအရ ဘိန်းမဲရှုမိကြသော တိုင်းရင်းသား အဘိုးအို၊ အဘွားအိုများ စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို အကျဉ်းထောင်တွင် ထားရှိခြင်းထက် ပြင်ပတွင် လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးဟောပြော ပညာပေးခြင်းအပါအဝင် အခြားသင့်လျော်သော နည်းလမ်းများ အသုံးပြု၍ ပြုပြင်ပေးသင့်ပါ သည်။ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ဥပဒေပြုစုရေးဆွဲရန် လိုအပ်ပါကလည်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြုစုရေးဆွဲ သင့်ပါသည်။
၁၁၂။ အခြားလျှော့ချသင့်သော အကျဉ်းသားများမှာ အသက် ၇၀ ကျော် ၈၀ ကျော် အဘိုးအို အဘွားအိုများ၊ ကျန်းမာရေး အလွန်ချို့တဲ့ပြီး နာတာရှည်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသူများအား ၎င်းတို့ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြန်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အကျဉ်းထောင်ပြင်ပတွင် နေထိုင်ခွင့်ပြုပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။ အလားတူ ပြည့်တန်ဆာမှုဖြင့် အကျဉ်း ထောင်အတွင်း ရောက်ရှိနေသော မိန်းကလေးငယ်များအား အကျဉ်းထောင်တွင် ထားရှိခြင်းထက် ပြင်ပတွင် ဆွေးနွေးဟောပြောပညာပေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာများ သင်ကြားပေးခြင်း တို့ အပါအဝင် အခြားသင့်လျော်သောနည်းလမ်းများ အသုံးပြု၍ ပြုပြင်ပေးသင့်ပါသည်။
၁၁၃။ အကျဉ်းထောင် အငြိမ်းစားအရာရှိကြီးများ၊ အငြိမ်းစား တရားသူကြီးများ၊ အငြိမ်းစား ရဲအရာရှိကြီးများ၊ စိတ်ပညာရှင်များ၊ အငြိမ်းစားကျောင်းဆရာကြီးများ၊ အခြားဂုဏ်သရေရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်များ စသည်တို့ပါဝင်သော အကျဉ်းသားစိစစ်လျှော့ချရေးကော်မတီများကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ အလိုက်ဖြစ်စေ၊ ခရိုင်အလိုက်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အမိန့်အာဏာဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးသင့်ပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့မှ လစဉ်ဖြစ်စေ၊ ၃ လတစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ၊ ၆ လ တစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ အကျဉ်းသားများ၏ အခြေအနေအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊ စိတ်ပညာရှင် များဖြင့် အကျဉ်းသားများ၏ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ အကဲခတ်ခြင်းများပြုလုပ်၍ အခါအားလျော်စွာ အကျဉ်းသားများအား လွတ်မြောက်စေခြင်း၊ နေ့ကြီး ရက်ကြီးများနှင့် နိုင်ငံတော်အတွက် ထူးခြားသော နေ့ရက်များတွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးခြင်း များ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။
၁၁၄။ အကျဉ်းထောင်များတွင် သေဒဏ်အမိန့် ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း မရှိဘဲ အကျဉ်းချထားသည့် အကျဉ်းသား …. ဦးရှိနေပါသည်။ သေဒဏ်မှ ထောင်တစ်သက်သို့ လျှော့ချပေးခြင်းခံရသော အကျဉ်းသား …. ဦးရှိနေပါသည်။ အဆိုပါအကျဉ်းသားများသည် အများ အားဖြင့် လူသတ်မှု၊ မုဒိမ်းကျင့်မှု၊ အလောင်းဖျောက်ဖျက်မှု စသည့် ကြီးမားသော ရာဇဝတ်ပြစ်မှုများ ကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အား သေဒဏ်ကျင့်သုံးခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကြောင့် အကျဉ်းဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် တာဝန်ကြီးမားပြီး ဝန်ထုတ် ဝန်ပိုးဖြစ်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အဆိုပါ အကျဉ်းသားများသည် ၎င်းတို့အား တရားရုံး မှ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သော်လည်း အမှန်တကယ် ကျင့်သုံးအပြစ်ပေးမှု မရှိသည့်အပြင် တစ်ချိန်ချိန်၌ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းပြီး အကျဉ်းထောင်အတွင်းတွင် ထိန်းသိမ်းရ ခက်ခဲ သော အကျဉ်းသားလူတန်းစားတစ်ရပ် ဖြစ်နေသဖြင့် သေဒဏ်အကျဉ်းသားများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်ပါကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။
၁၁၅။ အကျဉ်းစခန်းများ စစ်ဆေးမှုအနေဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း၌ ၂၅ ကြိမ် စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကျဉ်းစခန်းပေါင်း ၅၀ ခုရှိသဖြင့် ကျန်ရှိနေသော အကျဉ်းစခန်း ၂၅ ခု အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ဆက်လက် စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်း ၅၃ ခု၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်း ၄၅ ခု၊ ဆေးရုံအချုပ်ခန်း ၁၂ ခုတို့ကိုလည်း စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းပေါင်း ၁၆ ခု စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် ယခုနှစ်တွင် ၃ ဆကျော် ပိုမိုဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က တရားရုံးအချုပ်ခန်း ၅ ခန်းသာ စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် ယခုနှစ် တွင် ၉ ဆ ပိုမိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အလားတူ ဆေးရုံအချုပ်ခန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ၅ ခန်း စစ်ဆေးခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ၁၂ ခန်း စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ၂ ဆကျော် ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင် ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
၁၁၆။ ထို့ပြင် နားမကြားသော ကလေးများကျောင်း (မန္တလေး)၊ အမျိုးသမီးကလေးများ သင်တန်း ကျောင်း (မန္တလေး) နှင့် လူငယ်သင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) တို့အား ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၁၂ ရက်နေ့အထိ ကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့က သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များကို လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ များကို ကော်မရှင်သို့ ပေးပို့ ပြန်ကြားလာခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ဘိုးဘွားရိပ်သာ ၃ ခု၊ ပရဟိတဂေဟာ ၁၀ ခုတို့သို့လည်း သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ပြီး တွေ့ရှိ ချက်များအရ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ရာ သက်ဆိုင်ရာမှ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများကို ကော်မရှင်သို့ ပြန်လည် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
၁၁၇။ အကျဉ်းထောင်နှင့် အကျဉ်းစခန်းများအား စစ်ဆေးရာတွင် ကော်မရှင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့သို့ သီးခြား လွတ်လပ်စွာ သတင်းပို့တင်ပြခွင့် ပြုခဲ့သဖြင့် သတင်းပို့တင်ပြသူ အကျဉ်းသား ပေါင်းမှာ အကျဉ်းထောင်များတွင် ၃၂၀ ဦး၊ အကျဉ်းစခန်းများတွင် ၁၃၃ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၄၅၃ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်က လွတ်လပ်စွာ သတင်းပို့တင်ပြခဲ့သော အကျဉ်းသား ၁၁၅ ဦး ရှိခဲ့ ရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၄၅၃ ဦး ရှိလာသဖြင့် ယခင်နှစ်ကထက် ၄ ဆခန့် ပိုမိုတိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် သုံးသပ်ချက်
၁၁၈။ တိုင်တန်းစာများအနက် အချို့ အမှုကိစ္စများသည် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည့်အတွက် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရာ နေရာဒေသအထိ သွားရောက်ကွင်းဆင်း လေ့လာစစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ရ ပါသည်။ ပြည်တွင်းတိုင်တန်းချက်များအရ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့သည့်အကြိမ်ပေါင်း ၁၇ ကြိမ် ရှိခဲ့ပြီး ပြည်ပ အကြောင်းကြားစာ တစ်ခုဖြစ်သည့် မလေးရှားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ ပေးစာအရ မြိတ်မြို့နယ်ရှိ MSPP ဆီအုန်းကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ၁ ကြိမ်၊ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများမှ တွေ့ရှိချက်အရ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု ၆ ကြိမ် ရှိခဲ့ပါသည်။ ထူးခြား ဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသတွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု များ ရှိနေကြောင်း ပြည်ပစွပ်စွဲချက်များအရ ကွင်းဆင်း ကြည့်ရှုလေ့လာမှုကို ၂ ကြိမ် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပေါင်း ၂၆ ကြိမ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု ၆ ကြိမ်သာ ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခင်နှစ်ကထက် ၄ ဆကျော် တိုးတက် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၏ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုနှစ် ဆောင်ရွက် မှုများကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်
၁၁၉။ အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းနှင့် ဆေးရုံအချုပ် ခန်းများကို စစ်ဆေးမှုများကို ယခင်နှစ်ဆောင်ရွက်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်ပါက အောက်ပါ အတိုင်း အဆများစွာတိုးတက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ –
စဉ် အကြောင်းအရာ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ မှတ်ချက်
(၁) အကျဉ်းထောင်ပေါင်း ၉ ၃၀ ၃ ဆ
(၂) အကျဉ်းစခန်းပေါင်း ၅ ၂၅ ၅ ဆ
(၃) ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းပေါင်း ၁၆ ၄၈ ၃ ဆ
(၄) တရားရုံးအချုပ်ခန်းပေါင်း ၅ ၄၅ ၉ ဆ
(၅) ဆေးရုံအချုပ်ခန်း ၅ ၁၂ ၂ ဆ
စုစုပေါင်းချုပ် ၄၀ ၁၆၀ ၄ ဆ
(၆) တွေ့ဆုံခဲ့သော အကျဉ်းသားများ ၁၁၅ ၄၅၃ ၄ ဆ
(၇) ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း ၆ ၂၆ ၄ ဆ
၁၂၀။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ကော်မရှင်မှ စိစစ်ပေးရန် ပေးပို့ခဲ့သည့် တိုင်တန်းချက်များအပေါ် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးအပါအဝင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရများထံမှ လူ့အခွင့် အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ် အလေးထားလုပ်ဆောင်ပြီး ပြန်ကြားချက်များကို တိကျရှင်းလင်းပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာသော ပြန်ကြားချက်များရရှိခဲ့သည်ကို ယခင်နှစ်များကထက် ပိုမိုတွေ့ရှိရပါသည်-
(က) နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ တွင် အစာရေစာရှားပါးမှု ကြုံတွေ့နေရကြောင်း ပြည်ပအခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သော IWGIA မှ ပေးပို့သည့် တိုင်တန်းချက်ကို ကော်မရှင်မှ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးသို့ ပေးပို့တင်ပြခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဆက်လက် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(ခ) ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန။ တိုင်တန်းချက်များအပေါ် စနစ်တကျ လေ့လာစိစစ်မှု များ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အရေးယူရန်လိုအပ်ပါက တိကျစွာအရေးယူ၍ အောက်ပါအတိုင်း ပွင့်လင်းမြင် သာစွာ ပြန်ကြားခဲ့ခြင်းများသည် လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးထား လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ် သည်ဟု သုံးသပ်ရရှိပါသည်-
(၁) ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ နတ်ကျောက်ကျေးရွာမှ ရွာသား ၄ ဦး အား ခြေမြန်တပ်ရင်း တစ်ရင်းမှ စစ်ဆင်ရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် ခေတ္တ ခေါ်ယူ သွားရာ ရွာသားတစ်ဦး ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကော်မရှင်မှ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့က မေးမြန်းခဲ့ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ စနစ်တကျစုံစမ်းစိစစ်၍ တာဝန်ရှိသော တပ်ရင်းမှူးအား အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်း၊ စစ်ဗျူဟာမှူးကိုယ်တိုင် အဆိုပါ ကျေးရွာသို့ သွားရောက်၍လိုအပ်သည့် ကူညီ ထောက်ပံ့မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး ကော်မရှင်သို့ ၃-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲဖြင့် အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။
(၂) မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ ခေါဇာမြို့၊ မကျည်းချောင်းဝကျေးရွာနေ အရပ်သား ၂ ဦးကို သောင်းကျန်းသူများနှင့် မှားယွင်းပစ်ခတ်ခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကော်မရှင်မှ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၃-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲဖြင့် မေးမြန်းခဲ့ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ အဆိုပါ မှားယွင်းပစ်ခတ်ခဲ့သူ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိ အရာရှိအား တပ်မတော်မှ ရှုံ့ချ၍ အမြဲတမ်းထုတ်ပစ်ခဲ့ပြီး အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ကျခံစေရန် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်း ၁၉-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲဖြင့် အကြောင်း ပြန်ကြားလာခဲ့ပါသည်။
(၃) ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နေ မောင်ဂွမ်ဆိုင်းအောင် သေနတ်ထိမှန် သေဆုံးခဲ့မှုအတွက် ကော်မရှင်မှ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၆-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲဖြင့် မေးမြန်းခဲ့ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံး ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးပြီး စစ်တရားရုံး မှ အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူ တပ်သားအား အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ကျခံစေရန်နှင့် စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ အမြဲတမ်းထုတ်ပစ်စေရန် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက် ကြောင်း ၁၄-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲဖြင့် အကြောင်းပြန်ကြား လာခဲ့ပါသည်။
(၄) ရှမ်းပြည်နယ်၊ မန်တုံမြို့နယ်၊ တအောင်း (ပလောင်) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းမိုးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒ နယ်အမှတ် ၁၀ အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမိုင်းအုဏ်းခိုင်က မန်တုံမြို့နယ် အတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် တပ်မတော်သားများမှ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား များအပေါ် ပြုမူဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်မှ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ၂၉-၈-၂၀၁၇ ရက်စွဲဖြင့် မေးမြန်းခဲ့ ရာဝန်ကြီးဌာနမှ တိုင်တန်းချက် အပေါ် စိစစ်မှုများပြုလုပ်ပြီး အဓိကကျူးလွန်သူ ဒုတိယတပ်ကြပ်တစ်ဦးအား စစ်စည်းကမ်းအရ အရေးယူခြင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိ အရာရှိကြီး တစ်ဦးအား အပြစ်ဖော်ပြသတိပေး ဆုံးမခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲဖြင့် ပြန်ကြားလာခဲ့ ပါသည်။
(၅) နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ၊ လဟယ်မြို့နယ် ယမ်းကြုံ၊ လောင်ဂီးနှင့် ကာမွေလောရီ ကျေးရွာသားများဖြစ်သည့် ပညာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အပါအဝင် ၁၅ ဦးအား ၂၆-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ညနေတွင် ယင်းဒေသရှိ တပ်ရင်းမှူးနှင့် စစ်သည်အချို့က သေနတ်ပစ်ဖောက်ပြီး ကြိုး တုတ်ခြင်း၊ အဝတ်ချွတ်ခြင်း၊ မဖွယ်မရာပြုခြင်း၊ ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက် ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ကိစ္စ တိုင်တန်းချက်ကို ၉-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် လက်ခံရရှိပြီး ၃၀-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားခဲ့ရာ ၁၇-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အရေးယူနေကြောင်း ကနဦး ပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် အဆိုပါ တပ်ရင်းမှူးကို ရှုတ်ချ၊ ထုတ်ပစ်၊ ထောင် ၂ နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ၇-၁၂-၂၀၁၇ ရက် နေ့တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပြန်ကြားလာခဲ့ပါသည်။
(ဂ) ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန။ တိုင်တန်းချက်များအပေါ် စနစ်တကျ လေ့လာစိစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အရေးယူရန်လိုအပ်သည်မျာကိုလည်း တိကျစွာ အရေးယူ၍ အောက်ပါ အတိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပြန်ကြားခဲ့ခြင်းများသည် လူ့အခွင့်အရေးကို ပိုမို အလေးထား လုပ်ဆောင်လာသည်ဟု သုံးသပ်ရရှိပါသည်-
(၁) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းတနော်မြို့နယ်နေ နစ်နာသူတစ်ဦးက ၎င်းကို ကျူးလွန်သူက မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲပြီး အသင့်ပါလာသော သနပ်ခါးတုံးဖြင့် ခေါင်းအား ထုရိုက်ခဲ့သဖြင့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သောကြောင့် ရဲစခန်းသို့ ရဲဆေးစာ နှင့်တကွ အမှုသွားဖွင့်သော်လည်း အမှုဖွင့်မပေးခြင်း၊ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး (စာရေး) သည် နစ်နာသူအား ပျူငှါစွာဆက်ဆံမှုမရှိခြင်း၊ အမှုစစ်ဆေးရာတွင် အခင်း ဖြစ်ပွားရာ၌ ကျူးလွန်သူများ အသုံးပြုခဲ့သည့် ပစ္စည်းတို့အား သိမ်းဆည်း ခြင်းမရှိဘဲ တရားစွဲဆို တင်ပို့ခဲ့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တိုင်တန်းချက် အရ ကော်မရှင်မှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၂၇-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပေးပို့ခဲ့ရာ စခန်းမှူးသည် မိမိလက်အောက် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲမှု အားနည်းခြင်း၊ အခင်းဖြစ်ပွားပြီး ၅ ရက်ကြာမှ အမှုဖွင့်ခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရသည့်အတွက် တာဝန်ရှိသူတို့အား ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ၈-၈-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းပြန်ကြားလာပါသည်။
(၂) မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ အင်းဗြောင်ကုန်ထုတ်စခန်း၌ ကျောက်တုံးပိ၍ ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သော အကျဉ်းသားတစ်ဦးအား ​ဆေးဝါးကုသပေးခြင်း မရှိ သည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင် ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ ၁၈-၈-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြံပြုချက်များ ပေးပို့ခဲ့ရာ စခန်းတာဝန်ခံ အား ဌာနဆိုင်ရာ အရေးယူနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဒဏ်ရာရ ရှိသည့် အကျဉ်းသား အား ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ကုသပေးခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဆေးရုံမှ အကျဉ်းထောင်သို့ ပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် အကျဉ်းထောင် တာဝန်ခံအရာရှိများအနေဖြင့် ဆေးရုံဆရာဝန်၊ ဆရာမများ၏ တင်ပြအကြံပြုချက်များကို အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားရန် ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ၁၆-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက အကြောင်းပြန်ကြားလာပါသည်။ အဆိုပါ အကျဉ်း ထောင်တာဝန်ခံ အရာရှိအား ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း ရပ်ဆိုင်းသည့်ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် လိုက်သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
(၃) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့မရဲစခန်းရှိ တာဝန်ရှိသူများက အချုပ်သား တစ်ဦးအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင် ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ အကြံပြုချက်ကို ၂၈-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ရာ သက်သေများ၏ထွက်ဆို ချက်အရ အမှုစစ်ရဲအရာရှိသည် စွပ်စွဲခံရသူမှ ရန်ပြုရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို ဟန့်တားခဲ့ရာတွင် မဆင်မခြင်ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သဖြင့် ယင်းအမှု စစ်ရဲအရာရှိအား ရဲစည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အားနည်းသူ လှိုင်သာယာမြို့မရဲစခန်းမှူးအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ မှတ်တမ်းဝင် လက်မှတ်ရေးထိုး သတိပေး ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ၂၂-၈-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းပြန် ကြားလာပါသည်။
(၄) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်နေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တို့၏ တာဝန်မဲ့မှုများကို အရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်းလာသည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ ကော်မရှင်က ၉-၆-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပထမအကြိမ်၊ ၂-၈-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာ ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ရာ တိုင်တန်းသူ၏ သမီး သည် နေအိမ်တွင် ကြိုးဆွဲချသေဆုံးခဲ့သဖြင့် ဓမ္မတာ အတိုင်းသေဆုံးခြင်း ဟုတ် မဟုတ် စစ်ဆေးခဲ့ရာ တိုင်တန်းသူ၏သမီးဖြစ်သူ အားသူမ၏ရည်းစားဖြစ်သူနှင့် အမည်မသိသူတို့က သားမယားပြုကျင့် သွား ကြောင်း သမီးဖြစ်သူမှ မသေဆုံးခင် ပြောပြသိရှိရ၍ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့မ ရဲစခန်းတွင် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အမှန်တကယ် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ တရားခံ ၃ ဦးအား တရားစွဲဆို တင်ပို့ထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်းဝန်ကြီးဌာနက ၁၄-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပြန်ကြားလာပါသည်။
(ဂ) အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန။ ကော်မရှင်၏ အကြောင်းကြားစာများအပေါ် စုံစမ်းစိစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နစ်နာသူများအတွက် ထိုက်သင့်သည့် အခွင့်အရေးများရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုများကို ပြန်ကြားခဲ့ခြင်းများ သည် လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးထား လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ရရှိပါသည်-
(၁) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်ရှိ ကျေးရွာတစ်ရွာရှိ မိုက်ကယ် (ကျားပိုက်) ရေလုပ်ငန်းမှ အလုပ်ရှင် ဇနီးမောင်နှံက အလုပ်သမားများအား လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း သေဆုံးမှုကို တာဝန်မယူသည့်အတွက် ထိရောက်စွာ အရေးယူပေး ပါရန် တိုင်ကြားလာခြင်းကြောင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ လိုအပ်သလို စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ၉‑၁၀‑၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပေးပို့ခဲ့ရာ ၁၆‑၁၁‑၁၇ ရက်နေ့တွင် ဖျာပုံမြို့နယ်၊ အလုပ်သမားလျော်ကြေး စိစစ်ရေးကော်မတီက သေဆုံးသူ အလုပ်သမား၏ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် အလုပ်ရှင်တို့အား ညှိနှိုင်းစိစစ်ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပြီး အလုပ်သမား လျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၁.၅ သိန်းနှင့် ကရုဏာကြေးငွေ ကျပ် ၄.၅ သိန်း စုစုပေါင်းငွေကျပ် ၆ သိန်းကို ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀‑၁၂‑၁၇ရက်စွဲပါ စာဖြင့် ပြန်ကြားလာခဲ့ပါသည်။
(၂) မြဝတီမြို့၌ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေဖြင့် ထိန်းသိမ်းခံနေရသော မလေးရှား နိုင်ငံသား ၄ ဦးအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် မလေးရှား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က e‑mail ​ပေးပို့လာသဖြင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ လိုအပ်သလို စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး အတွက် ၁၉‑၉‑၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ရာ အဆိုပါ မလေးရှားနိုင်ငံသား ၄ ဦး အပါအဝင် ၉ ဦးအား ၂၀‑၉‑၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြည်နှင်မိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီး ၂၃‑၉‑၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးကြောင်း အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနမှ ၈‑၁၁‑၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပြန်ကြား လာပါသည်။
(၃) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းရှိ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက အလုပ်သမား ရပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာနေကြောင်း တင်ပြတိုင်ကြားလာသည့် အတွက် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန သို့ လိုအပ်သလို စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး ၂၄‑၃‑၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပေးပို့ခဲ့ရာ ၂၆‑၄‑၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီး ဌာနရုံး၌ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့အား ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပြီး နစ်နာသူ အလုပ်သမားအား နို့တစ်ကြေးနှင့် အလုပ်ရပ်စဲမှု နစ်နာကြေး ကျပ် ၃.၅ သိန်း ပေးချေခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၅‑၅‑၂၀၁၇ ရက်စွဲ ပါစာဖြင့် ပြန်ကြား လာပါသည်။
(၄) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ Laser Cutting Operator ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ သဖြင့် အလုပ်သမား ရပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် တင်ပြတိုင်ကြားလာသည့်အတွက် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနသို့ လိုအပ်သလို စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ၄‑၃‑၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ရာ ၁၁‑၄‑၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့က အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့အား ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ရာ နစ်နာသူအလုပ်သမားအား ကရုဏာကြေး ထောက်ပံ့ ငွေကျပ် ၃သိန်း ပေးချေပြီး ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ပြန်ကြားလာခဲ့ပါသည်။
(၅) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ငါးဖမ်းစက်လှေတစ်စင်းတွင် လှေလုပ်သားအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ် စက်လှေပေါ်မှ ပြုတ်ကျ သေဆုံးခဲ့ သဖြင့် အလုပ်သမား ရပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် တင်ပြတိုင်ကြားလာ ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ၂၀‑၁‑၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး အကြောင်းကြား ခဲ့ရာ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနက ၁၅‑၂‑၂၀၁၇ ရက်နေ့က စိစစ်ရာတွင် သေဆုံးသူ၏ မိခင်ဖြစ်သူက သေဆုံးကြောင်း အထောက်အထား မပြနိုင်သဖြင့် အလုပ်သမားလျော်ကြေးအက်ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိသော်လည်း အလုပ်ရှင်နှင့် ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ကရုဏာကြေး ကျပ် ၁၀ သိန်းပေးချေခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၁‑၂‑၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပြန်ကြားလာခဲ့ပါသည်။
(၆) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်ဆေးဝါးစက်ရုံမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ငြိမ်းငြိမ်းသည် လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီး အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း တိုင်ကြားလာသဖြင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ လိုအပ်သလို စိစစ် ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရေးအတွက် ၂၈‑၆‑၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပေးပို့ခဲ့ရာ ၁၁‑၇‑၂၀၁၇ ရက်နေ့ တွင် နစ်နာသူအား ဆေးကုသမှုစရိတ် ကျပ် ၅ သိန်းနှင့် ခရီးစရိတ် ကျပ် ၂ သိန်း စုစုပေါင်း ကျပ် ၇ သိန်း ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး ရန်ကုန် အလုပ်သမား ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးဝါးကုသမှု ဆက်လက်ခံယူလျက်ရှိကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၀‑၈‑၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပြန်ကြားလာပါသည်။
(ဃ) လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန။ ကော်မရှင်၏ အကြောင်းကြားစာများအပေါ် လိုအပ်သည့် စုံစမ်းမှု၊ ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နစ်နာသူများအတွက် ထိုက်သင့်သည့် အခွင့်အရေးများ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ ကြောင်း ပြန်ကြားခဲ့ခြင်းများသည် လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးထား လုပ်ဆောင်မှုများ ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ရရှိပါသည်-
(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မရမ်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေနက်ကြီး ကျေးရွာ၊ (၃) ရပ်ကွက်နေ ဦးမောင်ကြွက်မှ ၎င်း၏သမီးဖြစ်သူ မသီတာ (၁၄) နှစ်အား ပါရမီ၊ ညောင်ပင်မှတ်တိုင်အနီးရှိ စစ်တပ် ဝန်ထမ်း အိမ်ယာတွင်နေထိုင်သူ ဦးကိုကိုဝင်းနှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဗိုလ်ကြီး နွဲ့ရီဟန်တို့ အိမ်တွင် အိမ်အကူအဖြစ် တလလျှင် ထမင်းကျွေး ခြောက်သောင်း ကျပ် နှုန်း ဖြင့် ၁၄-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် စတင်လုပ်ကိုင်စေခဲ့ပြီး ၈ ရက် အကြာတွင် ဦးမောင်ကြွက်၏ ဆီးကျောက်ရောဂါအတွက် ခွဲစိတ်ရန်ငွေ လိုသဖြင့် သမီး ဖြစ်သူ၏လစာထဲမှာ တလလျှင် သုံးသောင်းကျပ် ခုနှိမ်စေကာ ကြိုတင်ငွေ ထုတ်ယူခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် သမီးဖြစ်သူထံ လစဉ်လစာငွေ သုံးသောင်း ကျပ်ပေးချေခြင်းမရှိခြင်း၊ ၎င်းတို့ဇနီး မောင်နှံမှာ အပြင်သွားတိုင်း သမီး ဖြစ်သူအား တိုက်ခန်းအတွင်းပိတ်ထားခဲ့ခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ရာတွင် နှေးကွေးသည့်အတွက် ခြေဖြင့် ကန်ကျောက်ခြင်းများ ပြုလုပ် ပြီး အဖိုးဖြစ်သူဆုံးပါး၍ မသီတာအား နေအိမ်သို့ပြန်ခေါ်ခဲ့ပြီး ပြန်မပို့ဖြစ်ခဲ့သဖြင့် အိမ်ရှင်ဇနီးမောင်နှံ မှ တရားစွဲဆိုနေကြောင်း တိုင်တန်းလာသဖြင့် ကော်မရှင်မှ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၂၂-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့ရာ အိမ်ရှင်ဇနီးမောင်နှံမှ ဦးမောင်ကြွက်အား ဆေးကုပေးထား၍ ကျေးဇူးဆပ်လိုပြီး အိမ်အကူလခလည်း ပိုရမည် ဖြစ်သဖြင့် လခငါးသောင်းကျပ်ရသည့် အခြားအိမ်မှ ပြောင်းကာ ယင်းအိမ်တွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား မေးမြန်းရာတွင် မသီတာတို့ မိသားစုမှာ ရပ်ကွက်ထဲတွင် နာမည်ပျက်ရှိကြောင်း နှင့် မသီတာနှင့် အတူလုပ်ကိုင်သော အိမ်အကူကိုမေးမြန်းရာတွင် မသီတာတို့ မိသားစု ထိုသို့လုပ်ဆောင်နေသည်မှာ တစ်ကြိမ်တည်း မဟုတ်ဟု ဖြေကြားခဲ့ ကြောင်း၊ မသီတာမှာ အသက် ၁၄ နှစ်မဟုတ်ဘဲ ၃၇ နှစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်း အား ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်သည်ဆိုသည့် ဗိုလ်ကြီးဒေါ်နွဲ့ရီဟန်မှာ မသီတာထက် ခန္ဓာကိုယ်သေး သူဖြစ်ကြောင်း၊ ပေးရန်ကျန်ငွေ ကျပ် ၈ သိန်းအားပြန်မပေးလို၍ လိမ်လည်တိုင်တန်းခဲ့သည်ဟု ယူဆရကြောင်း ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပြန်ကြားလာပါသည်။
(၂) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့နယ်၊ ပုဏ္ဏားစုရပ်ကွက်နေ ဒေါ်သင်းသင်းကြည် မှ ဦးဟန်ဝင်းအောင်ဆိုသူနှင့် တရားဝင်လက်ထပ် ထိမ်းမြားပြီး ကိုယ်ဝန် ၁၀ လ ရရှိလာချိန်တွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ ကွာရှင်းစာချုပ်ပေါ်တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးခိုင်း ကာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြောင်း၊ ဖခင်ဝတ္တရား ပျက်ကွက်နေကြောင်း တိုင်တန်းချက်အရ ကော်မရှင်မှ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၂၀-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ရာ တိုင်တန်းသူသည် ဦးကျော်လင်းဆိုသူနှင့် ၄ နှစ်ခန့် ပေါင်းသင်းပြီး သား ၁ ဦး မွေးဖွားပြီးနောက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် တိုင်တန်းသူ မှာ ကိုဟန်ဝင်းအောင် နှင့် facebook မှတဆင့်ရင်းနှီးခဲ့ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။ လက်မှတ်ရေးထိုးချိန်၌ တိုင်တန်း သူတွင် အိမ်ထောင်နှင့် ကလေးရှိခဲ့ခြင်းကို ကိုဟန်ဝင်းအောင်မှ မသိရှိခဲ့ရ ကြောင်း၊ ခင်ပွန်းသည်အိမ်တွင် လိုက်နေရင်း ကလေးအားခေါ်ထားလို ကြောင်း ပြောမှသာ ခင်ပွန်းနှင့် မိဘများသိရှိခဲ့ရာမှစ၍ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်ကာ ရပ်ကွက်ရုံးတွင် တရားဝင် ကွာရှင်းခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ကွာရှင်းပြီးနောက်မှ ကိုယ်ဝန်ရှိနေသဖြင့် ကာမလိမ်လည်မှုဖြင့် အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ သက်သေအထောက်အထားများ မပြည့်စုံမှုကြောင့် ကိုဟန်ဝင်းအောင်အား မြို့နယ်တရားရုံးမှ တရားသေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ တိုင်တန်းသူ မှာလည်း မြစ်ငယ်တွင် နေထိုင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်း ၂-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပြန်ကြားလာပါသည်။
(၃) မအူပင်ခရိုင်၊ ပန်းတနော်မြို့နယ်၊ ပုဇွန်လွှာကျေးရွာနေ ဒေါ်မြင့်ထွေးမှ ၎င်း၏ သားဖြစ်သူ ပဉ္စမတန်းကျောင်းသား မောင်ဆန်းကိုကိုအား တစ်ရွာတည်းနေ ဦးခင်သိန်း (ရဲဝန်ထမ်းဟောင်း) မှ ၎င်းပိုင်မြေအတွင်း ဝင်ရောက် ကျူးကျော်ဆဲဆို သည်ဟု ပန်းတနော်မြို့မ ရဲစခန်းတွင် ပုဒ်မ ၄၄၇/၂၉၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး ၁ နှစ်ကျော်ကြာသည့်အထိ နေအိမ်သို့ အကြိမ်ကြိမ် လာရောက် စစ်ဆေးခြင်း၊ ရဲစခန်းသို့ အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေခြင်းများကြောင့် ပညာသင်မှု အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေကြောင်း တိုင်တန်းချက်အရ ကော်မရှင်မှ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၂-၈-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ရာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်းရုံးမှ ပန်းတနော် မြို့နယ်တရားသူကြီးနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီး ကျောင်းချိန်လွတ်ချိန်တွင် ရုံးချိန်းခေါ်ယူရန်နှင့် ကလေးသူငယ် တရားရုံးတွင် သီးသန့်ခေါ်ယူစစ်ဆေးပေးရန် ညှိနှိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ ၂၆-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပန်းတနော်မြို့နယ်တရားရုံးမှ မောင်ဆန်းကိုကိုအား ရုံးချိန်းခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီး အမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါ ကြောင်း ၂၈-၈-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စာဖြင့် ပြန်ကြားလာပါသည်။
(၄) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ရတနာပုံမြို့သစ်နေ ဒေါ်လဲ့ရည်နန္ဒာသည် ဦးဇော်မင်းထွန်းဆိုသူနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးနောက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ မတရားရိုက်နှက်သဖြင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခဲ့ကြောင်း၊ ၄ လ ခန့် အကြာတွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့်ပြန်လည် ပေါင်းသင်းခဲ့ပြီး ဒုတိယကိုယ်ဝန် ၄ လ ရှိချိန်၌ လူမှုရေးဖောက်ပြန်နေသဖြင့် တည်းခိုခန်းသို့ လိုက်သွားရာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ ပြင်းထန်စွာကန်ကြောက်ထိုးကျိတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒဏ်ရာများပျောက်သည်ထိ မိခင်အိမ်တွင် အနားယူရန် ခင်ပွန်းထံတွင် ခွင့်တောင်း ၍ပြန်လာခဲ့သော်လည်း ကလေးမွေးဖွားပြီး ၄ လ ခန့်ရှိချိန်ထိ လာရောက် တွေ့ဆုံခြင်း၊ မိခင်နှင့် ကလေးစရိတ် ထောက်ပံ့ပေး ခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တိုင်ကြားသဖြင့် ကော်မရှင်မှ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ၁-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ရာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ ပြန်ကြားစာပေးပို့ခဲ့ရာ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်းရုံးမှ ကွာရှင်းခွင့်နှင့် ကလေးစရိတ်ရလိုမှုအတွက် ဥပဒေ အကြံပြုချက်များရယူနိုင်ရန်နှင့် တရားရင်ဆိုင် အတွက် လိုအပ်သည်များ ကူညီပေးနိုင်ရန် Case Myanmar Legal Clinic Myanmar အဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း ၄-၅-၂၀၁၇ ရက်စွဲ ပါစာဖြင့် ပြန်ကြား လာပါသည်။
(၅) မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ်၊ ကင်းချောင်းရွာနေ ဦးခင်လှိုင် (ခ) ဦးကုလားပုနှင့် ဒေါ်မြင့်ကြည်တို့မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ အိမ်အကူဇနီးမယားအဖြစ် လူကုန်ကူး ရောင်းစားခံခဲ့ရသော သမီးဖြစ်သူ မမေခိုင်ဦးအား အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရောက် ရှိရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန်တိုင်တန်းချက်အရ ကော်မရှင်မှ လူမှု ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၂၇-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ရာ မမေခိုင်ဦးအား အမှတ် (၁၇) လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး တပ်ဖွဲ့စု၊ မူဆယ်မှ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ယာယီလက်ခံ စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ၊ မူဆယ်သို့ လွှဲပြောင်းလာသဖြင့် လက်ခံ စောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီး မမေခိုင်ဦးအား မိဘအုပ်ထိန်းသူထံ ပြန်လည်အပ်နှံပြီးနောက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် Maristope International (MSI) နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲ စောင့်ရှောက်မှုများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၈-၅-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စာဖြင့် ပြန်ကြားလာ ပါသည်။
(င) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ။ ကော်မရှင်၏ အကြောင်းကြားစာများအပေါ် လိုအပ်သည့် စုံစမ်းမှု၊ ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နစ်နာသူများအတွက် ထိုက်သင့်သည့် အခွင့်အရေးများ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း ပြန်ကြားခဲ့ခြင်းများသည် လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးထား လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ရရှိပါသည်-
(၁) ကရင်ပြည်နယ်။ ကော့ကရိတ်မြို့ရှိ ရွှေပျံလွှားမုန့်စက်ရုံမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ ရေဆိုးရေညစ်နှင့် မုန့်ပွဆေး၊ ဓါတုဆေးရည်များ၏ အနံ့များကို ရှူရှိုက် နေရခြင်းနှင့် ပိုးလောက်လန်းများ ပေါက်ပွားနေခြင်းတို့ကြောင့် ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားပေးပါရန် တိုင်ကြားလာသဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့ လိုအပ်သလို စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ၂၀‑၂‑၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စာဖြင့် အကြောင်းကြား ခဲ့ရာ မြေပြင် အခြေအနေမှန်ကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေး ခဲ့ပြီး မုန့်စက်ရုံ၏ အားနည်းချက်နှင့် လိုအပ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်စေ သည့်အပြင် မုန့်လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်များအား အသိပညာပေး ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ် ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ မှ ၁၀‑၄‑၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပြန်ကြား လာပါသည်။
(၂) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မြို့နယ်တာဝန်ခံသည် သန့်ရှင်းရေး ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အချိန်သတ်မှတ်၍ အလုပ်ခိုင်းစေမှု မရှိခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် တာဝန်ချ ထားမှုမမျှတဘဲ ဝန်ထမ်းများကို ခြိမ်းခြောက်၍ အဓမ္မစေခိုင်းခြင်း၊ လူ ၃၁ ဦး ၏ လုပ်ခလစာများကို ထုတ်ယူသုံးစွဲနေခြင်း၊ တိုင်ကြားလာသဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ လိုအပ်သလို စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ရေးအတွက် ၁၉‑၁၂‑၂၀၁၆ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ရာ အဆိုပါ မြို့နယ်သန့်ရှင်းရေး တာဝန်ခံကို ဌာနဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်း စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက ၂၀‑၁‑၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ပြန်ကြားလာပါသည်။ (ဘယ်လိုအရေးယူသလဲ)
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့များ၏ ပြန်ကြားချက်များအပေါ် သုံးသပ်ချက်
၁၂၁။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့များ၏ ပြန်ကြားစာပေးပို့မှုများကို နောက်ဆက်တွဲ (ဋ) ဖြင့် ဖော်ပြထားရာ ပေးပို့စာတစ်စောင် အပေါ်တွင် ပြန်ကြားချက်တစ်စောင် ပြန်ကြားသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ပြန်ကြားသည်ဟု မှတ်ယူရ မည့်ဌာနပေါင်း ၆ ဌာန ရှိပါသည်။ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကော်မရှင်ထံမှပေးပို့စာ ၈ စောင်အပေါ်တွင် ၈ စောင်လုံး ပြန်ကြားလာခဲ့ခြင်း မှာ ကော်မရှင်၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်ဟု သုံးသပ်နိုင် ပါသည်။
၁၂၂။ ပေးပို့စာအပေါ်တွင် ၅၀ % အထက် ပြန်ကြားသော ဌာနများမှာ ပြည်ထဲရေး၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၈၁ %၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၇၅ %၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ၇၅ %၊ ဆောက်လုပ်ရေး ၇၅ %၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ၆၃ %၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ၅၄ %နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၅၃ % တို့ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၈ ဌာနရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ၁၀ % မှ ၅၀ % အထိ ပြန်ကြားသောဌာနများမှာ ၁၃ ဌာန ရှိပါ သည်။ ၁၀ % အောက် ပြန်ကြားသောဌာနမှာ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့တို့ ဖြစ်ပါသည်။ လုံးဝပြန်ကြားမှုမရှိသော ဌာနများမှာ ၉ ဌာနရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သည်။ ၅၀ % အောက် ပြန်ကြားသော ဌာနများနှင့် လုံးဝပြန်ကြားမှုမရှိသော ဌာနများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ယခုထက်ပိုမို၍ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု သုံးသပ်ရရှိပါသည်။
အကျဉ်းဦးစီးဌာနနှင့် ပတ်သက်သည့် သုံးသပ်အကြံပြုချက်များ
၁၂၃။ အကျဉ်းထောင်များ၌ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၏ မူလ အရင်းအမြစ်သည် အကျဉ်းဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း၊ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ စိတ်ခံစားမှု၊ ပင်ကိုယ် အမူအကျင့်နှင့် ခံယူချက်များ၊ အတွေးအခေါ်အယူအဆများကြောင့် ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အကျဉ်းထောင် ဝန်ထမ်းများအား အခါအားလျော်စွာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းများ လူ့အခွင့်အရေး သင်တန်းများကဲ့သို့သော သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေး ပွဲများ ဖွင့်လှစ်ကျင်းပပေး သင့်ပါသည်။
၁၂၄။ အကျဉ်းထောင် တာဝန်ခံအရာရှိများအနေဖြင့် လက်အောက်အမှုထမ်းများကိုလည်းကောင်း၊ အကျဉ်းသားများကိုလည်းကောင်း ဆက်ဆံရာတွင် မလိုအပ်ဘဲ ၎င်းတို့အပေါ် စိတ်ကျဉ်းကြပ်စေ မည့် အပြုအမူများ တတ်နိုင်သရွေ့ သတိထား ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အခြေခံ အခွင့်အရေး များဖြစ်သည့် စားဝတ်နေရေးတို့အနက် အဓိကကျသော စားသောက်ရေးကို ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ဘောင်အတွင်းမှ အတတ်နိုင်ဆုံး အဆင်ပြေ သင့်လျော်ကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ မလိုအပ်ဘဲ ကန့်သတ် ချုပ်ခြယ်ခြင်း၊ စည်းကမ်းတင်းကြပ်ခြင်းများကို သတိပြု ဆောင်ရွက် ခြင်းနှင့် အောက်ခြေဝန်ထမ်းများ၏ အကျဉ်းသားများအပေါ် ထားရှိရမည့် စိတ်နေသဘောထား၊ ကျင့်ဝတ်များကို နားလည်သဘောပေါက် စေရေး မကြာခဏ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။ ထို့ပြင် အကျဉ်းထောင်တာဝန်ခံအရာရှိများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းများ သီးခြားပို့ချပေး သင့်ပါသည်။
၁၂၅။ အကျဉ်းထောင်များမှ လွတ်ရက်စေ့၍ ပုံမှန်လွတ်မြောက်လာသူများကို အကျဉ်းဦးစီး ဌာနမှ ခရီးစရိတ်အဖြစ် တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၂၀၀ နှုန်းသာ ပေးခြင်းသည် နယ်ဝေး အကျဉ်းထောင်များတွင် ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူများအနေဖြင့် ၎င်းခရီးစရိတ်သည် ခေတ်ကာလနှင့် မညီညွတ်သည့်အတွက် အခက်အခဲများစွာ ကြုံတွေ့နေရခြင်းကြောင့် အကျဉ်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူပြီး မီးရထားလက်မှတ်၊ မော်တော်ကားလက်မှတ်များ ဝယ်ယူပေးခြင်း သို့မဟုတ် ခရီးအကွာအဝေးအလိုက် ကုန်ကျမည့် အခြေခံ ခရီးစရိတ် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် လမ်းခရီးတွင် မလွဲမသွေ ကြာမြင့်နိုင်မည့်ရက်အတွက် အခြေခံစားစရိတ် ထုတ်ပေးခြင်းများကို နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်မှခွင့်ပြုပေးသင့်ပါသည်။
၁၂၆။ အကျဉ်းသားများ ကျန်းမာရေး မကောင်းပါက ကုသရန်အတွက် အကျဉ်းဦးစီးဌာနမှ ခွင့်ပြု ပေးနေသော လစဉ် ဆေးဝါးဝယ်ယူစရိတ်မှာ လက်ရှိအကျဉ်းသား အင်အားနှင့် လုံလောက်မှု မရှိ သဖြင့် ဆေးဝါးမလောက်ငှခြင်း၊ အမျိုးအစား စုံလင်မှုမရှိခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အကျဉ်းသား အင်အားနှင့် အချိုးကျ တွက်ချက်၍ ဘဏ္ဍာရံပုံငွေများ ခွင့်ပြု​ပေးသင့် ပါသည်။
၁၂၇။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း လုံလောက်မှုမရှိခြင်းသည်လည်း အကျဉ်းသားများ၏ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် အရေးကြီးသော လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ရာ ယင်းကိစ္စကိုလည်း ယခင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်ထိ လိုအပ်ချက် များရှိနေဆဲဖြစ်သဖြင့် ဆရာဝန်နှင့် သူနာပြုများအား အကျဉ်းဦးစီးဌာန အစီအစဉ်ဖြင့် ကျန်းမာရေး ဆေးပညာဘွဲ့ရများအား လွတ်လပ်စွာ စုဆောင်းခန့်ထားခွင့်ပြုပေးသင့်ပါသည်။
၁၂၈။ ကျောက်ထုတ်စခန်းများတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေရသော အကျဉ်းသူများသည် လေးလံ သောဝန်များကို ကာလတာရှည် လုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါက ရေရှည်တွင် အလုပ်ဒဏ်ကို ခံစားရနိုင်ပြီး အပြင်​လောက ရောက်ရှိချိန်၌ သားအိမ်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အခက်အခဲ များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းနှင့် အခြားအမျိုးသမီးရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်သဖြင့် အဆိုပါ အမျိုးသမီး ကုန်ထုတ်စခန်းများအားပိတ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အကျဉ်းသူများအစား အကျဉ်းသား များဖြင့် အစားထိုး ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
၁၂၉။ ကုန်ထုတ်စခန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရသော အကျဉ်းသားများသို့ လုပ်အားခ ပေးငွေ တစ်နေ့ ၂၀၀ ကျပ်အစား ပြင်ပတွင်သတ်မှတ်ထားသော တစ်နေ့လုပ်ခ နှုန်းထား အပေါ်အခြေခံ၍ သင့်တင့်သော ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်၍ နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်မှ ခွင့်ပြုပေးသင့်ပါသည်။
၁၃၀။ HIV​, TB ​​ဖြစ်ပွား​နေသော ရောဂါသည် အကျဉ်းသား၊ အကျဉ်းသူများကို ART နှင့် TB ဆေးများဖြင့် ကုသနေစဉ်တွင် အင်အားဖြည့်အစားအစာနှင့် ဆေးဝါးများ ဖြည့်စွက်ကျွေးမွေးနိုင် ရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရံပုံငွေများ ခွင့်ပြု​ပေးသင့်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ပြင်ပနေထိုင်ခွင့်ပြုပေးသင့်ပါသည်။
၁၃၁။ မသန်စွမ်းအကျဉ်းသား၊ အကျဉ်းသူအများစုကို ရေချိုးချိန် သီးခြားပေးခြင်း၊ ဘိုထိုင် အိမ်သာများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် အလေးစွန့်ရန်အတွက် အိမ်သာများတွင် အထိုင်အထ အဆင်ပြေစေရန် အစားထိုးထိုင်ခုံများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ လက်ကိုင်တန်းများ တည်ဆောက်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက် ပေးသင့်ပါသည်။
၁၃၂။ အကျဉ်းသားများကို မိသားစုဝင်များက လာရောက်တွေ့ဆုံသည့် ထောင်ဝင်စာ အခန်းများ သည် အကျဉ်းသားအင်အားနှင့် မမျှတသောကြောင့် အချိန်လုံလောက်စွာ တွေ့ခွင့်မရရှိသဖြင့် ထောင်ဝင်စာ အခန်းများ၏ အကျယ်အဝန်းကို အကျဉ်းသားဦးရေနှင့် အချိုးကျ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ် ပေးနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ဘတ်ဂျက်ချမှတ် ခွင့်ပြုပေးသင့်ပါသည်။ (ဥပမာအားဖြင့် အကျဉ်းသား ၁၀၀၀ ရှိလျှင် ၂၀ ဦးနှုန်း)
၁၃၃။ လက်ရှိ အခြေအနေတွင် ထောင်ဝင်စာတွေ့ဆုံသည့် အခန်းများမှာ အကျဉ်းသားနှင့် လာရောက် တွေ့ဆုံသူတို့အကြားတွင် လုံခြုံရေးအရ သံတိုင်များ၊ သံစကာများ အထပ်ထပ်ခြားထားသည့်အပြင် ယင်းသံစကာများတွင် ဖုန်များ၊ ပင့်ကူမျှင်များ ကပ်ငြိနေခြင်းကြောင့် လာတွေ့သူ၏ မျက်နှာကိုပင် မမြင်ရခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြိုင်အဆိုင် အော်ဟစ်ပြောဆိုမှသာ အသံကြားရ ခြင်းများကြောင့် မိသားစု အရေးကိစ္စများ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးပြောဆိုရန် အခက်အခဲများစွာ တွေ့နေကြ ရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မှန်အထူဖြင့်ကာရံခြင်း အင်တာကွန်းတယ်လီဖုန်းများဖြင့် စကား​ပြောနိုင်ရေး စီစဉ်ပေးသင့်ပါသည်။ (မြိတ်အကျဉ်းထောင်တွင် စမ်းသပ် ကျင့်သုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်)
၁၃၄။ အကျဉ်းထောင်သို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး အကျဉ်းထောင်အတွင်း၌ မွေးဖွား သည့် မိခင်အကျဉ်းသူများနှင့်အတူ နေထိုင်ရသည့် ကလေးငယ်များသည် အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်၏ အသက်ကို ၅ နှစ်မှ ၇ နှစ်အထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ယင်းကလေးငယ်များအတွက် မူလတန်းပညာ သင်ကြားခွင့်ကို စီစဉ်ပေးရမည့်အပြင် ကလေးငယ် ၏ အကျဉ်းထောင်အတွင်း နေထိုင်ရသည့် ကာလကို မိခင်အကျဉ်းသူအတွက် လျော့ရက်တွက်ရာ တွင် ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
၁၃၅။ အကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိနေသော ကလေးငယ်များအတွက် မူကြိုကျောင်းများ၊ ကလေး ကစားကွင်းများအား ဗဟိုအကျဉ်းထောင်၊ (က) အဆင့်အကျဉ်းထောင်၊ (ခ) အဆင့်အကျဉ်းထောင် စသည် ဖြင့် ဦးစားပေး အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပေးသင့်ပါသည်။ အကျဉ်းကျ လူငယ်များအား အခြေခံပညာ၊ အလယ်တန်းပညာ၊ အထက်တန်းပညာများ သင်ကြားခွင့်ရရှိရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးသင့်ပါသည်။
၁၃၆။ မကွေးမြို့မရဲစခန်း အချုပ်ခန်းအတွင်း ချုပ်နှောင်ထားသော မသင်္ကာတရားခံ တစ်ဦးသည် အချုပ်ခန်းအတွင်း ကြိုးဆွဲချသေဆုံးခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကော်မရှင်က ၁-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့ မှ ၃-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ၄-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဌာနသို့ အကြံပြုချက် ၄ ချက် ပေးပို့ခဲ့သည့်အနက် အကြံပြုချက် အမှတ်စဉ် ၄ တွင် မကွေးမြို့မ ရဲစခန်းတွင် အချုပ်ခန်း ၁၂ ခန်းရှိပြီး အချုပ်သားဦးရေ ရာနှင့်ချီ၍ ချုပ်နှောင်ထားရှိရခြင်းကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ပင်မရဲလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ယခုကဲ့သို့ မလိုလားအပ်သည့်ဖြစ်စဉ်များ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖွယ်ရှိသဖြင့် ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းတွင် ယခု ကဲ့သို့ အချုပ်သား အမြောက်အများ ချုပ်နှောင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရဲလုပ်ငန်းစနစ်ကို ပြန်လည်စိစစ် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်ဟု အကြံပြု ခဲ့ပါသည်။
၁၃၇။ အကြံပြုချက်အပေါ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၄-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့စွဲပါ စာအမှတ် ပထရ/ လူ့ခွင့် (၃၄၇)/ဦး ၁ ဖြင့် မကွေးခရိုင်အတွင်း အကျဉ်းထောင်မရှိသဖြင့် ယခုအချိန်တွင် မကွေး မြို့နယ်၊ တည်ပင်ကန်ပေါက် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံပြား-​ရေနံချောင်း ကားလမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၃၄၂) တွင် မြေဧက (၆၉.၆၂) ဧကတွင် အကျဉ်းထောင်ဆောက်လုပ်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် မကွေးမြို့မရဲစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာလည်း ပင်မ ရဲလုပ်ငန်း တာဝန်များအပြင် အခြားလုံခြုံရေး နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တာဝန်များကိုပါ ကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြလျှက် ပြန်ကြားလာပါသည်။
၁၃၈။ သို့ရာတွင် ၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် မကွေးမြို့မရဲစခန်းအချုပ်မှ တရားခံ ၆ ဦး အချုပ် ခန်း ဖောက်ပြေးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထဲရေး၏ပြန်ကြားစာအရ အကျဉ်းဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အကျဉ်းထောင်ဆောက်ရန် မြေနေရာရရှိထားပြီး စတင်ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အလိုက် ရန်ပုံငွေခွင့်ပြုချက်အရ လာမည့် ၃ နှစ်ကြာမှသာ အကျဉ်းသားများ လက်ခံနိုင်သည့် အကျဉ်းထောင် တစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရှိရသဖြင့် အလားတူဖြစ်စဉ်မျိုး ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ဖြစ်နိုင်သမျှ ဆောလျင်စွာ အကျဉ်းထောင်သစ်ကို တည်ဆောက်သင့်ပါကြောင်းနှင့် အကျဉ်းထောင်သစ် တည်ဆောက် နေဆဲ ကာလအတွင်း အလားတူပြဿနာမျိုး ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်း များ ရှာဖွေဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ် ပါသည်။
၁၃၉။ အပိုဒ် ၂၅ (ခ) တွင် ဖော်ပြပါရှိသော အမရပူရမြို့၌ အိမ်ရှင်ဇနီးမောင်နှံက အိမ်အကူ မိန်းကလေးငယ် မအေးကြင် ၁၄ နှစ်ကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်း၊ အပိုဒ် ၂၅ (စ) တွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဓနုဖြူမြို့၌ ဖခင်ဖြစ်သူက အရွယ်မရောက်သေးသော မိန်းကလေးငယ် မထိုက်ထိုက်ထွန်း ၁၀ နှစ် ခန့်နှင့် တူတော်စပ်သူ မောင်ကံ ၆ နှစ် တို့ကို လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း ဆုံးမခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်နီးချင်းများ၊ ရပ်ကွက်မှတာဝန်ရှိသူများက သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းများသို့ တိုင်ကြားခဲ့သော်လည်း အမှုဖွင့်ပေးခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ရာတွင် အပိုဒ် ၂၅ (ဂ) တွင်ပါရှိသော မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဂိတ်ရှိ စတိုးဆိုင်၌ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေ သည့် မိန်းကလေးငယ် မထက်ထက်ဇော် (၁၂ နှစ်) နှင့် မမေသဇင် (၁၀ နှစ်) တို့ ၂ ဦးအား ဆွေညီနောင်စတိုးဆိုင်ရှင် အမျိုးသမီးက နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းအနေဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အမှုဖွင့်လှစ် အရေးယူခြင်း၊ တာဝန်ရှိအခြား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်း ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ စနစ်တကျပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါ သည်။
၁၄၀။ သို့ဖြစ်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွင်း ရဲလုပ်ငန်းကို တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်သူများ ရှိသကဲ့ သို့ ရဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အမှုစတင်ဖွင့်လှစ်ရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း၊ နောက်ကျ ခြင်းများ ကြောင့် မလိုလားအပ်သည့် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်ရပြီး၊ ပေါ့ဆစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများရှိနေသေး သည်ဟု သုံးသပ်ရရှိသဖြင့် ပြည်သူလူထုနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေကြရ သော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ရဲလုပ်ငန်းတာဝန်များအပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတများ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် ထားရှိရမည့် စိတ်နေစိတ်ထား၊ ခံယူချက်နှင့် ရဲကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ မွမ်းမံသင်တန်းများကို ရာထူး အဆင့်အတန်း အားလုံး ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးသင့်သည်ဟု သုံးသပ် အကြံပြု တင်ပြအပ်ပါသည်။
၁၄၁။ မြို့နယ်အသီးသီးရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေကြရသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် နယ်မြေလုံခြုံရေးကင်းလှည့်ခြင်း၊ သတင်းကြားသိရာနေရာသို့ သွားရောက်၍ ဖမ်းဆီး ခြင်း၊ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ် လုံခြုံရေးတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ အခမ်းအနား များတွင် လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ အချုပ်သားများအား အကျဉ်းထောင်မှ တရားရုံးသို့ ပို့ဆောင်ရာတွင် အသွားအပြန် လုံခြုံရေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ ဆေးရုံတက်နေသော အကျဉ်း သား၊ အချုပ်သားများ၏ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရခြင်း စသည်ဖြင့် များပြားသည့် လုပ်ငန်းတာဝန် များကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိရာ ဆေးရုံများတွင် ရောဂါမတူသည့် အကျဉ်းသားလူနာ ၂ ဦး၊ ၃ ဦး ထက် မက ရှိလာချိန်တွင် နေရာခွဲဝေပြီး လုံခြုံရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်ရခြင်းကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အား လုံလောက်မှုမရှိသည့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေကြရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးများတွင် အကျဉ်းသား၊ အချုပ်သားများ ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသနိုင်ရေးအတွက် ဆေးရုံအချုပ် ခန်း (Guard Ward) များ ကျား၊ မ ခွဲခြား ၍ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာတွဲဖက်လျက် စနစ်တကျတည်ဆောက်ပေးသင့်ပါသည်။
၁၄၂။ ကလေးသူငယ် ဥပဒေ အခန်း (၉) ၊ ပုဒ်မ ၃၇ တွင် ရဲအရာရှိ သို့မဟုတ် အရေးယူပိုင်ခွင့် ရှိသူသည် ပြစ်မှုကျုးလွန်ကြောင်း စွပ်စွဲခံရသော ကလေးသူငယ်ကို လက်ထိပ်ခတ်ခြင်း၊ ကြိုးဖြင့် ချည်နှောင်ခြင်း မပြုရ၊ လူကြီးတရားခံများနှင့်အတူ ရောနှော၍ထားရှိခြင်း မပြုရ၊ ပုဒ်မခွဲ (စ) အရ ကလေးသူငယ် တရားရုံးသို့ အမြန်ဆုံး တင်ပို့နိုင်ခြင်းမရှိပါက ကလေးသူငယ်အား ခံဝန်ချုပ်ဖြင့် လွတ်ထားရမည်ဟု လည်းကောင်း၊ ကလေးသူငယ်နည်းဥပဒေ အခန်း ၁၂၊ ကလေးသူငယ်အား ပြစ်မှုဖြင့် အရေးယူခြင်း၊ အပိုဒ် ၆၄ တွင် ရဲစခန်းတွင် ရဲအရာရှိတစ်ဦး၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ထားရှိရမည်၊ လက်ထိပ်ခတ်ခြင်း၊ ကြိုးဖြင့်ချည်နှောင်ခြင်း မပြုရဟုလည်းကောင်း သတ်မှတ်ထား ခြင်းကြောင့် အသက် ၁၇ နှစ်ခန့်ရှိပြီး လူသတ်မှု လုယက်မှု စသည့် ပြစ်မှုကြီးများ ကျူးလွန်ခဲ့ကြ သည့် ကလေးသူငယ်များအား အချုပ်ခန်းအတွင်း မထားဘဲ အပြင်တွင်ထားပါက မျက်ခြည် မပြတ်ကြည့်ရှုနေရန်မှာ အလွန်ခက်ခဲပြီး ထွက်ပြေးပါကလည်း တာဝန်ရှိသူ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မှာ ထောင် ၃ နှစ်ကျခံရသည်ထိ အရေးယူခြင်းခံကြရ ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ရဲစခန်းများတွင် ကလေးသူငယ်များ အတွက် ထိန်းသိမ်းရန်နေရာများ သီးခြားစီစဉ် ဆောင်ရွက် ထားပေးသင့်ပါသည်။
၁၄၃။ လက်ရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြည့်မီခြင်းမရှိသဖြင့် ထမ်းဆောင်နေရသော တာဝန် များနှင့် ဖိစီးနေကြပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ရဲဝန်ထမ်းသစ်များ စုဆောင်းခြင်းကို ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ခရိုင်အလိုက် စုဆောင်းပြီး လေ့ကျင့်ရေးပြီးဆုံးပါက စုဆောင်းခဲ့သော ခရိုင် နှင့်မြို့နယ်များသို့ပြန်လည် နေရာချထားပေးခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ပြုန်းတီးအင်အားများ လျော့နည်း သွားနိုင်သည်ဟုသုံးသပ်ရရှိပါသည်။
တရားရုံးအချုပ်ခန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြံပြုချက်
၁၄၄။ တရားရုံးအချုပ်ခန်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်ရေးကိစ္စ။ တရားရုံးအချုပ်ခန်း အများစုသည် တရားရုံး များနှင့် တွဲဆက်မနေဘဲ သီးခြား အဆောက်အဦငယ်တစ်ခုတွင် ဖွဲ့စည်းထားကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းများတွင် အချုပ်သား အနည်းငယ်သာရှိပြီး အချို့အချုပ်ခန်း များတွင် အချုပ်သား လုံးဝမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသော်လည်း ယင်းရဲစခန်းအချုပ်ခန်းများသည် ဧရိယာကျယ်ဝန်းပြီး ခိုင်ခံ့ လုံခြုံမှုများ ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သို့ရာတွင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အချုပ်သားများကို အကျဉ်းထောင်မှ သယ်ယူ၍ တရားရင်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ ပို့ဆောင်စစ်ဆေးရာတွင် အသုံးပြုသည့် တရားရုံးအချုပ်ခန်း များမှာမူ ကျဉ်းမြောင်း ခြင်း၊ အိမ်သာနှင့် အပေါ့သွားခန်းများ တွဲဖက်မထားခြင်း၊ လုံခြုံရေးတာဝန် ထမ်းဆောင် သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် နေရာလုံလောက်မှု မရှိခြင်းများ တွေ့ရှိနေရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ တရားရုံး အချုပ်ခန်းများကို တစ်နှစ်အတွင်း ပျမ်းမျှ လာရောက်သည့် အချုပ်သားဦးရေအပေါ် မူတည်၍ လုံလောက်သည့် အကျယ်အဝန်းရှိသော တရားရုံးအချုပ်ခန်းများကို ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် ၏ ရန်ပုံငွေမှ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြု ပေးသင့်ပါသည်။
၁၄၅။ တရားရုံးအချုပ်ခန်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး။ တရားရင်ဆိုင်နေကြသော အချုပ်သားအချို့ သည် အကျဉ်းထောင်အတွင်း၌ စည်းကမ်းသေဝပ်စွာ နေထိုင်ကြသော်လည်း တရားရုံးအချုပ်ခန်း ရောက်သည်နှင့် ဆေးလိပ်သောက်ရန်၊ ကွမ်းစားရန် တောင်းဆိုခြင်း၊ ခွင့်မပြုပါက လုံခြုံရေးတာဝန် ရှိသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အား နှုတ်ဖြင့် မကြားဝံ့မနာသာ ဆဲဆိုခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်ခြင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်သည်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်က ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပါက အနီးရှိ ပြည်သူအချို့နှင့် မီဒီယာများက ဓာတ်ပုံနှင့် ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ရိုက်ယူပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ သိက္ခာကျစေရန် မမှန်သတင်း ထုတ်လွှင့်ခြင်း များကြောင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းတာဝန် ထမ်းဆောင် နေကြသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အချို့မှာ နုတ်ထွက်စာ တင်သည်အထိ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းသူများ ရှိလာကြ ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ တရားရုံးအချုပ်ခန်းနှင့် တရားရုံးသို့ သွားသည့်လမ်းကို လုံခြုံရေးအရံအတားများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ CCTV တပ်ဆင်ပေးထားပြီး မှတ်တမ်းရိုက်ယူခြင်းများ ပြုလုပ် သင့်ပါသည်။
၁၄၆။ တရားရုံးအချုပ်ခန်း ဧည့်တွေ့ခြင်း။ တရားရုံးအချုပ်ခန်းများတွင် ဧည့်တွေ့လာရောက်သည့် မိသားစုအချို့သည် အချုပ်သားများထံသို့ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ပေးသွင်းခြင်း၊ ဓား၊ လွ၊ တယ်လီ ဖုန်း အစရှိသည့် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့် ပစ္စည်းများ ပေးသွင်းခြင်းများကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်သည်ကို တရားရုံးလုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက မတွေ့ရှိဘဲ အကျဉ်းထောင်တွင် စစ်ဆေးသည့်အခါမှ တွေ့ရှိသည့်အခါများတွင် ယင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံကြရပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ မဖြစ်စေရေးအတွက် မိသားစုများနှင့် တွေ့ဆုံမှုကို ကန့်သတ်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သည့်အခါ အထက်ဖော်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း အချုပ်သားများ၏ ဆဲဆိုခြင်း၊ ရန်ပြုခြင်းများကို ခံနေကြရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ တရားရုံး အချုပ်ခန်းများတွင် ဧည့်တွေ့ခန်းများကို အကျဉ်းထောင် ထောင်ဝင်စာခန်းများကဲ့သို့ စနစ်တကျ တည်ဆောက်ပေးသင့်ပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁၅၁။ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ယခင်နှစ် များက လုံးဝစစ်ဆေးမှု မပြုလုပ်ရသေးသော အကျဉ်းထောင် ၁၄ ခုအား စစ်ဆေးသွားမည့်အပြင် စစ်ဆေးပြီး အကျဉ်းထောင်များအနက် ကော်မရှင်၏ အကြံပြုတိုက်တွန်းခဲ့မှုများအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုများကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည့် အကျဉ်းထောင်များနှင့် လိုအပ်ချက်များ တွေ့ရှိလာသည့် အကျဉ်းထောင်များကိုလည်း ထပ်မံစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၅၂။ လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းချက်များအား ကော်မရှင်သို့ ပေးပို့တိုင်တန်းနိုင်ကြောင်းကို မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားတွင်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ များတွင်လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင် Website နှင့် Facebook တို့တွင် လည်းကောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးမြင့်တင်ရေးနှင့် ပညာပေးရေးဌာန၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲများတွင် လည်းကောင်း၊ ပြည်သူများသို့ အသိပေးလျက်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကော်မရှင် အနေဖြင့် တိုင်တန်းချက်များ ကို ယခင်နှစ်များကထက် ပိုမို လက်ခံရရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားရာ လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်သည်ဟု ယူဆရသည့် တိုင်တန်းချက်များအပေါ် ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
 ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရများထံမှ ပြန်ကြားစာရရှိမှု အခြေအနေကို နောက်ဆက်တွဲ (ဋ) ဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
 ကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို နောက်ဆက်တွဲ (ဌ) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကို နောက်ဆက်တွဲ (ဍ) ဖြင့်လည်းကောင်း ဖော်ပြပါသည်။
 စစ်ဆေးပြီး အကျဉ်းထောင်စာရင်းအား နောက်ဆက်တွဲ (ဎ) ဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
 အကျဉ်းထောင်အလိုက် အကျဉ်းသားနှင့်အချုပ်သား ဦးရေအခြေပြဇယားအား နောက်ဆက်တွဲ (တ) ဖြင့်ဖော်ပြပါသည်။
 စစ်ဆေးပြီး အကျဉ်းစခန်းများစာရင်းအား နောက်ဆက်တွဲ (ဏ) ဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ
စဉ် တိုင်တန်းချက်များပါအမှု အမျိုးအစားများ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅
၁။ မြေယာမှု ၉၅၇ ၆၂၆ ၁၅၈၃
၂။ တရားရေးမှု ၁၆၆ ၁၄၁ ၃၀၇
၃။ ပင်စင်+ ဝန်ထမ်း အမှု ၁၄၈ ၉၂ ၂၄၀
၄။ ရဲမှု ၈၆ ၇၃ ၁၅၉
၅။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှု ၉၇ ၅၃ ၁၅၀
၆။ စည်ပင်မှု ၄၂ ၄၄ ၈၆
၇။ ငွေကြေးမှု ၄၄ ၃၆ ၈၀
၈။ အမျိုးသမီးများနှင့်ဆိုင်သောအမှု ၁၇ ၂၀ ၃၇
၉။ အကြမ်းဖက်မှု ၁၇ ၆ ၂၃
၁၀။ မြစ်ဆုံကိစ္စ ၁၆ – ၁၆
၁၁။ အလုပ်သမားမှု ၂ ၁၅ ၁၇
၁၂။ သာသနာရေးမှု ၈ ၉ ၁၇
၁၃။ လူကုန်ကူးမှု ၁၁ ၂ ၁၃
၁၄။ တိုင်းရင်းသား+ မျိုးနွယ်စုကိစ္စ ၉ – ၉
၁၅။ သင်္ဘောသားအမှု ၇ – ၇
၁၆။ ကလေးစစ်သားအမှု ၅ ၂ ၇
၁၇။ အင်းကိစ္စ ၅ ၂ ၇
၁၈။ ထောင်မှု ၄ ၅ ၉
၁၉။ ရှေ့နေလိုင်စင်အမှု ၃ ၃ ၆
၂၀။ တပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအမှု ၂ ၃ ၅
၂၁။ ကလေးသူငယ် – ၄ ၄
၂၂။ အမှုပိတ် – ၃ ၃
၂၃။ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား – ၁ ၁
၂၄။ အခြား ၂၀၉ ၁၄၇ ၃၅၆
စုစုပေါင်း ၁၈၅၅ ၁၂၈၇ ၃၁၄၂
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဇူလိုင်လ အထိတိုင်တန်းချက်များအပေါ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ
စဉ် အကြောင်းအရာ ပြည်တွင်း ပြည်ပ
၁။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖြေရှင်းပြီးလက်ကျန်အမှုပေါင်း ၂၂၉ မှု ၁၅၄ မှု
၂။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် တိုင်တန်းချက်ပေါင်း ၁၂၈၇ မှု ၂၅၉၈မှု
၃။ ဝန်ကြီးဌာနများအကြောင်းကြားခြင်း ၂၈၈ မှု ၆၄၁ မှု
၄။ အထောက်အထားမပြည့်စုံ၍တိုင်ကြားသူထံအကြောင်းကြားခြင်း ၁၃၆ မှု
၅။ တိုင်ကြားသူထံ အကြံပြုချက်ပေးပို့သောအမှုများ ၁၅၀မှု ၃၁၈ မှု
၆။ ကော်မရှင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း မကျရောက်ကြောင်း တိုင်ကြားသူထံ ပြန်ကြားမှု ၉ မှု
၇။ တိုင်တန်းသူအား စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ရှိသဖြင့် ကော်မရှင်ရုံးတွင် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံမှု ၁၀ မှု
၈။ မှတ်တမ်းတင်ထားသောအမှုများ ၅၁၉ မှု ၉၇၃ မှု
၉။ ကာယကံရှင်ဆန္ဒအရ ပိတ်သိမ်းလိုက်သောအမှုများ ၁၀ မှု
၁၀။ လိုအပ်ချက်အရ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့သောအမှုများ ၆ မှု
၁၁။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ ပြန်ကြားလာသောအမှုများ ၄၃၂ မှု
၁၂။ သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ပြန်လည်မေးမြန်းထားသောအမှုများ ၃၂ မှု
၁၃။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ ပြန်ကြားမှုကိုတိုင်ကြားသူထံ ထပ်ဆင့် အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း ၁၆၇ မှု
၁၄။ ပြန်ကြားချက်အရ ဆောင်ရွက်ရန် မလိုအပ်သဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော အမှုများ ၄၃ မှု
၁၅။ ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြန်ကြားမှုကို ကာယကံရှင်ဆန္ဒအရ ပိတ်သိမ်းမှု ၁ မှု
၁၆။ စုံစမ်းမှု ပြီးပြတ်သောအမှု ၁၁ မှု
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဦးယုလွင်အောင်၊ ဒေါက်တာ ဉာဏ်ဇော်နှင့် ဒေါက်တာ ​ဒေါ်သန်းနွဲ့တို့သည် အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်အား ၁၇-၂-၂၀၁၅ နေ့နှင့် ၁၈-၂-၂၀၁၅ ​နေ့များတွင် ကြည့်ရှု စစ်ဆေး၍ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက် ၁၂ ချက်ကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ပြီး၊ MNHRC Website တွင် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန် link-
၎င်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အကြံပြုချက်များအဖြစ် ထောင်သက် ၁၄ နှစ် အထက်ရှိသော အကျဉ်းသားများကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အတွက် စဉ်းစားပေးရန် အချုပ်ကာလ ကြန့်ကြာနေသော အမှုများကို မှန်မှန်နှင့် မြန်မြန် စစ်ဆေး ပေးရန်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို စိစစ်ရန်၊ နိုင်ငံခြားသား အကျဉ်းသားများကို မိခင်နိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
စစ်တွေမြို့နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့တို့ရှိ အကျဉ်းထောင်နှင့် ရဲအချုပ်ခန်းများ
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်နှင့် ဒေါ်မြမြ တို့သည် စစ်တွေမြို့နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့တို့ရှိ အကျဉ်းထောင်နှင့် ရဲအချုပ်ခန်းများအား ၂-၄-၂၀၁၅ ​နေ့နှင့် ၃-၄-၂၀၁၅ ​နေ့များတွင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၍ အကြံပြု တိုက်တွန်းချက် ၁၈ ချက်ကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ပြီး သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန် link-http://www.mnhrc.org.mm/mynews/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8/
၎င်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အကြံပြုချက်များအဖြစ် ဘူးသီးတောင်ထောင်တွင် ပြည်နှင်ဒဏ်ချမှတ် ပြီး ပြန်လည်ချုပ်နှောင်ထားသည့် နိုင်ငံခြား သားများအား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသို့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးရန်၊ စစ်တွေထောင်တွင် သေဒဏ်အကျဉ်းသားများ၏ အယူခံအဆင့်ဆင့်ကို သတ်မှတ် ကာလ အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ ရဲအချုပ်ခန်းများတွင် အလင်းရောင်နှင့် လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန် စေရန်၊ အိမ်သာနှင့် ကြမ်းခင်းများ ပြုပြင်ရန်တို့ ပါဝင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်းနှင့် ဒေါ်သန်းနွဲ့တို့သည် မိုင်းဆတ် အကျဉ်း ထောင်အား ၇-၅-၂၀၁၅ ​နေ့တွင် ကြည့်ရှု စစ်ဆေး၍ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက် ၁၂ ချက်ကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ပြီး၊ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြည့်ရှု နိုင်ရန် link- http://www.mnhrc.org.mm/my-news/3574-2/
၎င်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အကြံပြုချက်များအဖြစ် ဇာတိရပ်ရွာနှင့် ဝေးကွာသော အကျဉ်းသားများအား နီးစပ်ရာထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးရန်၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ ဖြည့်တင်းရန် တို့ပါဝင်သည်။
မန္တလေးမြို့၊ နောင်ချိုမြို့၊ သီပေါမြို့နှင့် လားရှိုး မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်နှင့် အလုပ်စခန်းများ
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဦးညွန့်ဆွေနှင့် ဒေါ်မြမြ တို့သည် မန္တလေးမြို့၊ နောင်ချိုမြို့၊ သီပေါမြို့နှင့် လားရှိုးမြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်နှင့် အလုပ်စခန်းများ အား ၈-၆-၂၀၁၅ မှ ၁၁-၆-၂၀၁၅ နေ့ထိ ကြည့်ရှု စစ်ဆေး၍ အကြံပြု တိုက်တွန်းချက် ၁၆ ချက် ကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန် link-http://www.mnhrc.org.mm/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8m/
၎င်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အကြံပြုချက်များအဖြစ် မန္တလေးထောင်၌ အကျဉ်းသား ကြပ်တည်း နေမှုအတွက် အိပ်ဆောင်များ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန်၊ အာမခံပေးသင့်သည့် အချုပ်သားများကို အာမခံပေးရန်၊ သီပေါအကျဉ်းထောင် အိပ်ဆောင်များတွင် မျက်နှာကျက် ပန်ကာများ တပ်ဆင်ပေးရန်၊ ​နောင်ချိုမြို့နယ် အလုပ်စခန်းများရှိ စာကြည့်တိုက်များတွင် စာအုပ်များ ဖြည့်တင်းပေးရန်တို့ ပါဝင် သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းတိုင်တန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-
(က) ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်နှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၁ ဦးတို့သည် တိုင်တန်းသူ ဗိုလ်မှူးတင့်ဆွေ (ငြိမ်း) ၏မိဘဘိုးဘွားပိုင် ဥယျာဉ်ခြံမြေ အငြင်းပွားမှု တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ (ယခင် မုဒုံမြို့နယ်)၊ ရိုးဂိုး ကျေးရွာသို့ ၂၂-၄-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ ၂၅-၄-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ သွားရောက် ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းနှင့် တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက် အထားပြည့်စုံစွာဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံး၌ တရားရေးလမ်းကြောင်းဖြင့် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အကြံပြုပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။
(ခ) ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်နှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည် တိုင်တန်းသူ ဦးသောင်းမြင့်က သိမ်းဆည်းခံလယ်မြေများအား ပြန်လည် စွန့်လွှတ် ပေး ပါရန်တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ် သို့ ၁၀-၆-၂၀၁၅ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ တရားရေးလမ်းကြောင်း အတိုင်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသင့် ကြောင်း တိုင်တန်းသူထံသို့ အကြံပြု ပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။
(ဂ) ကော်မရှင်ရုံးမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာဇေယျာစိုးနှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် တိုင်တန်းသူ ဦးသိန်းစိုး (ပါ)၂၄ ဦးတို့က အိမ်ခြေ၂၂၄ လုံး၏ အိမ်ထောင်စုများအား နစ်နာမှုမရှိစေရေးအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးပါရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်သို့ ၂၄-၆-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လိုအပ်သလို စိစစ်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် ပေးရန် အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အဆိုပါမြေနေရာသည် ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီမှ အားကစားကွင်း ပြုလုပ်ရန်လျာထားသည့် မြေနေရာပေါ်တွင် ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ခြင်း ကြောင့် အရေးယူဆောင်ရွက်နေခြင်းအပေါ် တိုင်တန်းသူတို့မှနေထိုင်ခွင့်ရရှိရေးတင်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားလာပါသည်။ အဆိုပါ ပြန်ကြား ချက် အပေါ်တွင်လည်း တိုင်တန်းသူများထံသို့ ဆောင်ရွက်ထားရှိ မှုကို အကြောင်းပြန် ကြားခဲ့ပါသည်။
(ဃ) ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်နှင့်ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦး တို့သည် တိုင်တန်းသူ ဦးသောင်းစိန် (ပါ) ၅ ဦးတို့က ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးငွေ၏ အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုကို ဖော်ထုတ်ပေးပါရန်တိုင်တန်းချက်နှင့် စပ် လျဉ်း၍ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ကတုတ်ဘုရားကြီးကျေးရွာသို့၇-၇-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ တိုင်ကြားသူများမှ မမှန်မကန် တိုင်ကြားခြင်း၊ တိုင်ကြားခံရသူထံတွင် လယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာရှိပြီး အခွန်ဆောင်ထားခြင်း၊ မြို့နယ်အဆင့် လယ် ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ မြေယာမှုခင်းဖွင့်ပြီး တိုင်ကြားသူများ၏အမှုကို ပလပ်ခဲ့ခြင်း၊ တရားရုံးသို့ ရောက်ရှိနေသောအမှုဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် မှတ်တမ်းထား ရှိပါသည်။
(င) ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်နှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် အင်တာနက် သတင်းအရ အရွယ်မရောက်သေးသော အိမ်အကူ မိန်းကလေးငယ် မသန်းသန်းအိအား ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍၎င်းနေထိုင်ရာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ လေးဒေါင့်ကန်စံပြရပ်ကွက်သို့ ၁၀-၈-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ ကို လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်ရုံး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် အမျိုးသမီး ရေးရာအဖွဲ့များသို့ ပေးပို့ခဲ့ရာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဌာနမှ မသန်းသန်းအိ အဒေါ်ဖြစ်သူ၏အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းတွင် အမည် ဖြည့်သွင်းပေးပြီး ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ် ပြားကို ကာယကံရှင် မသန်းသန်းအိလက်ဝယ်သို့ ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်ရုံးမှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား တရားစွဲဆိုရမည့် ပုဒ်မများကို အကြံပြုပေးခဲ့ခြင်း၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အမှုပြီးမြောက်ချိန်တွင် မသန်းသန်းအိ ဆန္ဒရှိပါက အမျိုးသမီး သက်မွေးအတတ်ပညာသင်ကျောင်းတွင် လက်ခံစောင့်ရှောက်ထားရန် ဆောင်ရွက် ထားခြင်း စသည်တို့ကို အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၇၊ ၃၂၅ တို့ဖြင့် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းတရားရုံးသို့ တရားစွဲဆို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(စ) ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည် ၁၀-၃-၂၀၁၅ရက်နေ့တွင် ကျောင်းသားသပိတ်ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ လက်ပံတန်းမြို့နယ်ရှိ အောင်မြေ ဗိမ္မာန် ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ၁၁-၈-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကို ကော်မရှင်၏ Website တွင် သတင်းထုတ် ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(ဆ) ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်နှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် အလုပ်သမား လုပ်အားခ နစ်နာကြေးငွေမပေးဘဲ ခြံအတွင်းမှ မောင်းထုတ်သဖြင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများကို ဖြေရှင်းပေးရန် တိုင်တန်းချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းသူ ဦးခင်လှ၊ ဒေါ်ကျင်တို့နေထိုင်ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ဖောင်ကြီးအနောက်ကျေးရွာအုပ်စုသို့ ၁၈-၈-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကွင်းစင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းနှင့်တရားရေးလမ်းကြောင်းအတိုင်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း သင့်ကြောင်း တိုင်တန်းသူထံသို့ အကြံပြု ပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။
(ဇ) ​ကော်မရှင်ရုံးမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသူရကျော်နှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၁ ဦးတို့သည် အိမ်ရှင်ဖြစ်သူမှ အိမ်အကူ မိန်းကလေးအား ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းသူ မအေးအေးမွှေး နေထိုင်ရာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်သို့ ၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ အိမ်အကူ မိန်းကလေး အား ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းကို အရေးယူပေးပါရန် ညှိနှိုင်းမေးမြန်းခဲ့ရာ ဥပဒေ ဘောင်အတွင်းမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အကာအကွယ်ပေး ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ ပါသည်။
(ဈ) ကော်မရှင်ရုံးမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသူရကျော်နှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် တိုင်တန်းသူ ဦးဋ္ဌေးဝင်း (ပါ) ၂ ဦးက ဒဂုံမြို့သစ် စီမံကိန်းမြို့ကွက် ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော်မှသိမ်းဆည်းခဲ့သည့် လယ်ယာမြေနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါရန်တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ယခင် သိမ်ချောင်းရှမ်းကျေးရွာ၊ ယခု၅၄ ရပ်ကွက် သို့ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ အမှုမှာ တရားမကြီးမှုအမှတ် ၃၁၉/၂၀၁၅ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး တရားရုံးရောက်နေသည့် အမှုဖြစ်၍ တရားရုံး၏ စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်းသာ လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့် ကြောင်း တိုင်တန်းသူထံသို့ အကြံပြုပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။
(ည) ကော်မရှင်ရုံးမှ လူ့အခွင့်အရေးအရာရှိ ဦးရဲနောင်လွင်နှင့် ကော်မရှင်ရုံး ဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည်တိုင်တန်းသူ ဦးထွန်းထွန်းဦးကထန်းတပင်ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးနှင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် ကိုဇော်မင်းဦးနှင့် ကိုအောင်ဇော်မိုးတို့အား ဥပဒေအရ စုံစမ်း ဖော်ထုတ် အရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်သို့ ၁၆-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ ၁၇-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ထန်းတပင်မြို့နယ်တရားရုံးမှ တရားမမှုဖြင့် စစ်ဆေး စီရင်ပြီးသောအမှုဖြစ်ပြီး စီရင်ချက်အား မကျေနပ်၍ အယူခံဝင်ရောက်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရ၍ တရားရေးလမ်းကြောင်း အတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားရန် တိုင်တန်းသူထံသို့ အကြံပြုပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။
၆။ တိုင်တန်းသူ၏နစ်နာချက်များကို တိုင်ကြားခံရသူက သိရှိ ကုစားပေးနိုင်ရန်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုများကို ကော်မရှင်ရုံး၌ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်-
(က) ၃၀-၃-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာ ဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည်တိုင်တန်းသူဦးကျော်သိန်း(ထားဝယ်) (ပါ) ၂ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။
(ခ) ၁၂-၅-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ တိုးကြောင်ကလေးကျေးရွာရှိ ငါးမွေးမြူရေးကန် စုစုပေါင်း (၅.၁၁) ဧကကို အားကစားဝန်ကြီးဌာနက သိမ်းဆည်းရယူခဲ့သော တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းသူ ဦးလှဟန်အား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။
(ဂ) ၁၇-၉-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာ ဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည် အော်ရီဒူး (မြန်မာ) ကုမ္ပဏီ၏ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များ တည်ဆောက်နေသဖြင့် သဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူနေအိမ်များပေါ်တွင် ပြိုလဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်မိုးကြိုးအန္တရာယ် ကျ​ရောက်မှု ဖြစ်ပွားလာနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် တာဝါတိုင်တည်ဆောက်မှုကို ဟန့်တားပေးပါရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အော်ရီဒူး (မြန်မာ) ကုမ္ပဏီမှမန်နေဂျာ ဒေါ်သီရီကြာညို (ပါ) ၂ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။
(ဃ) ၂၈-၉-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် မော်လမြိုင်မြို့ရှိ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင် ဘဏ်၏အိမ်သာကျင်း (မိလ္လာကန်) နေရာရွှေ့ပြောင်းပေးပါရန် တိုင်တန်းချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းခံရသူ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ် (ကိုယ်စား) အကျိုးတော် ဆောင် ဦးဟန်ထူး(ပါ) ၂ ဦး တို့အား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။
(င) ၁၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် လုပ်အားခ ပေးရန်ကျန်ငွေကို လက်ဝယ်ရရှိ ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေပေးပါရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းသူ ဦးစိန်မောင်ကို (ပါ) ၃ ဦးနှင့် တိုင်တန်းခံရသူ ဧရာဝဏ်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းမှ ဦးဝင်းဋ္ဌေး (ပါ) ၃ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။
(စ) ၁၃-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၄ ဦးတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပါရှိသည့် နိုင်ငံသား များ၏ မူလအခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်ခံခဲ့ရသည့် တိုင်တန်းချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းသူ ပတ္တမြားမြေခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးအေးကျော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ ပါမောက္ခ ဦးခင်စိန် မောင် (ပါ) ၇ ဦး တို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။
(ဆ) ၆-၁၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်က ပြည်သူပိုင်သိမ်း ယူခဲ့ပြီး ယခုအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ သော့ခတ်ထားသော ဆိုင်ခန်းကို ပြန်လည်ရရှိရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းသူ ဦးအုန်းကျော်အား တွေ့ဆုံဆွေး နွေးညှိ နှိုင်းခဲ့ပါသည်။
(ဇ) ၁၆-၁၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည် အမြဲတမ်းနေထိုင်သော အိမ်ခြံမြေ ပေါ်တွင် အော်ရီဒူးဆက်သွယ်ရေးမိုဘိုင်းတာဝါတိုင်များ တည်ဆောက်နေသဖြင့် သဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူနေအိမ်များပေါ်တွင် ပြိုလဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်မိုးကြိုးအန္တရာယ်ကျ​ရောက်မှု ဖြစ်ပွားလာနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် တာဝါတိုင် တည်ဆောက်မှုကို ဟန့်တားပေးပါရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ Myanmar Tower Company မှ Ms. Anais Chevallier နှင့် ဦးပန်ကူးလ်တို့အား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။
(ဈ) ၁၇-၁၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည် အိမ်အလှဆင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ငွေများ ယုံကြည်စွာအပ်နှံခဲ့ပြီး အလီလီ ပြန်လည်ခွဲပေးရာ မူလငွေပမာဏ ပြန်မရ ၍ ကျန်ငွေများအားရရှိရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းသူ ဒေါ်ရွှေရွှေလေး (ပါ) ၂ ဦးနှင့် တိုင်တန်းခံရသူ ဦးမျိုးဇော်လတ်တို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ခဲ့ပါသည်။
(ည) ၉-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် သိမ်းဆည်းခံ မြေယာများအား ကာလပေါက်စျေးအတိုင်း လျော်ကြေးပေးနိုင်ရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းခံရသူ ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီ (ကိုယ်စား) အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးကိုကိုအောင် (ပါ) ၂ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။
(ဋ) ၁၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည် တိုင်တန်းသူ ဒေါ်ခင်အေး (ပါ) ၂ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။
(ဌ) ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် ကာမလိမ်လည်ရယူမှု တိုင် တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းခံရသူ ​ဒေါက်တာ သန်းဝင်းတင်အား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။
အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစခန်းများသို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှု
၇။ ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွင်း အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ရေးစခန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ဆောင်ရွက်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) ၄-၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစစ်မြိုင်၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည်လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ငှက်အော်စမ်းကျေးရွာ၊ ငှက်အော်စမ်းလူငယ်သင်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
(ခ) ၁၇-၂-၂၀၁၅ရက်နေ့နှင့်၁၈-၂-၂၀၁၅ရက်နေ့များတွင်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးဇော်ဝင်း၊ ဦးယုလွင်အောင်၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါက်တာဒေါ်သန်းနွဲ့နှင့် ကော်မရှင် ရုံး ဝန်ထမ်း ၄ ဦးတို့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး အကျဉ်းသူ၊ အကျဉ်းသား ၆၀ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
(ဂ) ၂-၄-၂၀၁၅ ရက်နေ့ မှ ၆-၄-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာ ဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် ရခိုင် ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်နှင့် ရဲအချုပ်ခန်း များအား သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
(ဃ) ၆-၅-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ ၉-၅-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဒေါ်သန်းနွဲ့နှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၁ ဦးတို့သည် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းဆတ်မြို့ရှိ အကျဉ်းထောင်အား သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
(င) ၈-၆-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ၁၂-၆-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဦးညွန့်ဆွေ၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီး၊ မန္တလေးမြို့ရှိ အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်နှင့် အလုပ်စခန်းများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ နောင်ချိုမြို့၊ သီပေါမြို့နှင့် လားရှိုးမြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်များနှင့် အလုပ်စခန်း များအား သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
(စ) ၁၃-၇-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ ၁၄-၇-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့်ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးရှိ သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်အား သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ ပါသည်။
(ဆ) ၆-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ ၁၀-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်နှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသ ကြီး၊ ကော့သောင်းမြို့နှင့် မြိတ်မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်နှင့် ရဲအချုပ်ခန်းများအား သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ မြစ်ကြီးနားမြို့ စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ သွားရောက်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ ကော့သောင်းမြို့နှင့် မော်လမြိုင်မြို့များသို့ သွားရောက်၍ အကျဉ်းထောင်များအား စစ်ဆေးခြင်း
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း၊ စံပယ်တောင်နှင့်ကြေးစင်တောင်စီမံကိန်းများသို့ သွားရောက်ခြင်း
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအတွင်း ဖြစ်ရပ်များအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်